That's so good, right?: January 2010
2 Straight Guys
ကျွန်တော်ဟာ စာရင်းကိုင်အဖြစ် Shipping company တစ်ခုမှာအလုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူဋ္ဌေးက ကျွန်တော့်အလုပ်ကြိုး စားမှု အတွက်ပျော်ရွှင်သလို သဘောလည်းကျပါတယ်။ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်အဖြစ် စာရင်းအမှားအယွင်းမရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်သလို ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးတက်လမ်းရှိမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာ ကြောင့်ပါ။ ရုံးခန်းထဲမှာ ရုံးအဖွဲ့ဝင် အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရုံးခန်းဖွဲ့စည်းပုံအရ အခန်းငယ် လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အခန်းလေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ ရင်းနီး နွေးထွေးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကြားမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပျော်ရွှင် ပြည့်စုံရပါတယ်။ မိန်းကလေးဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်၊ အမျိုးသားဝန်ထမ်းနှစ် ယောက် ကျွန်တော်နဲ့ဆို စုစုပေါင်း ငါးယောက်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့က မကြာခဏ ရယ်စရာတွေပြောဆိုကြ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်း ရင်းနှီးနှီး နောက်ပြုကြနဲ့ ကြားနေရတာ။ ရယ်စရာရှိရင် ရယ်မောကြ၊ စိတ်ညစ်စရာရှိရင်လည်း ဝေဖန်အကြုံပြုကြဆိုတော့ အရင်လုပ်ကိုင် ခဲ့တဲ့အလုပ်ထက်စာရင် ပျော်စရာကောင်းပါ့။ အရင်အလုပ်တုန်းက ကိုယ့်ဘာသာနေ၊ အပေါင်းအသင်း အဆက်အဆံမရှိကြပါဘူး။
တစ်ခုသော နေ့လည်ခင်းမှာ သူဋ္ဌေး ရုံးခန်းထဲဝင်လာပြီးနောက် ၀န်ထမ်းတိုင်းပျော်ရွှင်ရမယ့် ပါတီပွဲလေးတစ်ခု ကုမ္ပဏီဝင်းအတွင်းက စား သောက်ဆိုင်မှာကျင်းပမည့်အကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ အားလုံးစနေနေ့ညအတွက် ဖိတ်ကြားမှုကို လက်ခံရရှိခြင်းပဲပေါ့။ ရုံးခန်းထဲက ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ခြင်းစီအတွက် သူဋ္ဌေးရဲ့ ဖိတ်ကြားမှု ကိုလက်ခံဖြစ်ကြပါတယ်။ ရုံးဝန်ထမ်းကျွန်တော်တို့အပြင် ပြင်ပကတခြား ၀န်ထမ်းများလည်း တက်ရောက်ကြမှာပါ။
စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ဧည့်ခန်းမတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်အပါအ၀င် စုစုပေါင်း၁၅ယောက်ဟာ boss ရဲ့ကျွေးမွေးမှုအတွက် ချီးမြှောက်တက် ရောက် ကြပါတယ်။ ကော့တေးလ်မျိုးစုံဖျော်စပ်ပေးမဲ့အဖျော်ဆရာနဲ့ ဘူဖေးစနစ်အတွက် အကူအညီပေး မဲ့ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေက အသင့်။ ပြောစရာမလိုတဲ့ညလေးပါ။ အားလုံးသောက်ဖို့ အဆင်သင့်။
ညနေခင်းတစ်ခုက မကြာခင်အဆုံးသတ်တော့မှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိလိုက်တယ် ဒီလောက်ဆိုတော်သင့်ပြီပေါ့ သောက်တာ။ အိမ်ပြန် ခရီးကို ၃မိုင်လောက် ကားမောင်းရဦးမှာမို့လေ။ ဒါကြောင့် ညစာစားပွဲမှာ ၀ိုင်တစ်ခွက်ကို နော်ကဆုံးအဖြစ်သောက်ပြီး အပြတ်ဖြတ်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက် သဘာဝသစ်သီးဖျော်ရည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေ ဖျော်စပ်ပေးနေတဲ့ ဘားနားသွားပြီး လိမ္မော်ဖျော်ရည်ချိုချိုကို နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အားပေး လိုက်ပါသေးတယ်။ အရက်နာ ဘယ်တော့မှမကျတဲ့ ကျွန်တော့်လျှို့ဝှက်ချက်လေး ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ရုံးဝန်ထမ်းထဲ ကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုခိုင်ဝင်း ကျွန်တော့်ဆီလှမ်းလာရင်း စကားဆိုတယ်။ 'ဇာနည် အပြန်ကား ကြုံလိုက်ချင်လို့ကွာ အဲဒါ ဖြစ်နိုင်မလားလို့ 'သူ့ကားက ၀ပ်ရှော့တစ်ခုမှာ လုပ်ဖို့အပ်ထားတာမို့ ပြီးတော့ကားမောင်းဖို့လည်း မအိုကေဘူး ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း ခေါ်မယ်လို့ အလွယ်ပြောလိုက်မိတာ။ သူနေတာနဲ့ ကျွန်တော်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ဆန့်ကျင် ဘက်ဆိုတာ ပြီးမှ သတိရဖြစ်ပါ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်စရာပါတီပွဲလေးကိုဆင်နွှဲအပြီးမှာ နှစ်ယောက်သား ကျွန်တော့်ကားဆီပြန်လာကြပါတယ်။ ကိုခိုင်ဝင်းက အနည်းငယ် ယိုင်ချင်တယ် လမ်းလျှောက်တာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ဘေးကထိန်းပေးရတာပေါ့။ ကျွန်တော့် ဘော်ဒါတစ်ချို့ကိုလည်း ကူညီပေးနေကျ ဆိုတော့ ဒီအခြေအနေကို ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုရှေ့ ခန်းဘေးက ခုံမှာထိုင်ခိုင်း ကျွန်တော်က ဒရိုင်ဘာခုံမှာ ထိုင် ကာ အသာလှိမ့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။
'မလိုပါဘူးဗျာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပဲ ဥစ္စာ'
သူနေထိုင်ရာလိပ်စာကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းရွတ်ပြတယ်။ အဲဒီနေရာက ကျွန်တော့်အိမ်နဲ့အနည်းဆုံး ၅မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ် မှာ ဖြစ်နေလေရဲ့။ အို....ဘာမှတွေးမနေတော့ဘူး ကူညီသင့်လို့ကူညီရတာပဲ။ ကိုခိုင်ဝင်းခင်မျာ ဗလုံးဗထွေးနဲ့ သူ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေး နေသေးတာ။ ကျွန်တော်လည်းမောင်းရင်းပြုရင်းနဲ့ မိနစ်အနည်းငယ်မှာပဲ သူ့အိမ်ရှေ့တံခါးဝရောက်ရှိသွားလေသတည်းပေါ့။
ကိုခိုင်က သူ့အခန်းဆီလိုက်ပို့ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းတော့ ကူညီလက်စနဲ့ ကူညီလိုက်ဖို့ သဘောညီရပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကြမ်းဖျင်းတော့သိသပေါ့လေ ၃လွှာမှာသူနေတယ်၊ ပြီးတော့ ဓာတ်လှေကားမရှိ။ ကိုခိုင်ရှေ့ကို တစ်လှမ်းလှမ်းလိုက် နောက်ကိုယိုင် လိုက်နဲ့ ကြာရင်ဒုက္ခရောက်မှာ။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုထိန်းကိုင်ရင်း အပေါ်ကို ဦးဆောင်ခေါ်ရတော့တာ။ ကျွန်တော်တို့ အခန်းရှေ့ရောက် တော့ သူ့သော့ကို ဘောင်းဘီရှေ့အိပ်ထဲ တစမ်းစမ်းနှင့် ရှာတယ် အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ အပြင်ကိုဆွဲမထုတ်နိုင်ဘူး သူ့ခမျာ။ ဒါနှင့်စိတ်မရှည်ဘဲ ကျွန်တော်သူ့အိပ်ကပ် ထဲနှိုက်ရှာလိုက်တာ သော့တော့တွေ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ကိုအမြန်ပြန်ရုပ်သိမ်းဖြစ်ရပါ့။ သူ့ငပဲက မာတောင်နေသ လေ။ စမ်းမိရုံပါလေ.....သူအရမ်းသောက်ထားတော့ သေးပေါက်ချင်လို့ မာနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။
သူ့တိုက်ခန်းထဲ အတူတူဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အတော်ရစ်တဲ့လူပဲ ကူညီမိတာမှားပါတယ်။ အခုလည်းသေးပေါက်ချင်လို့ သန့်စင်ခန်းကို သွားချင်ပြန်သတဲ့။ သူ့ပါးစပ်ကတော့ ကျေးဇူးစကားမချဘူး။ ကိုယ်တော် မြန်မြန်လျှောက်ပြီး အိမ်သာ အမြန်ရောက်တာက ပိုကောင်းပါ တယ်။ စကားဆိုလိုက် လမ်းလျှောက်တာကိုရပ်လိုက်နဲ့ ရေချိုးခန်းကိုရောက်အောင် လိုက်ပို့ရတယ်။ သန့်စင်ခန်းရောက်ပြန်တော့ မ ပေါက်သေးပြန်ဘူး ငူငူကြီးရပ်နေပြန်ရော။
'ငါ့ကောင် ပြောရမှာလည်းအားနာတယ်ကွာ။ ငါ့ –ီးကို အပြင်ထုတ်ဖို့ကူညီပါဦးကွ ဇစ်နဲ့ညပ်မှာစိုးလို့'
ခင်ဗျားကတော့လုပ်ချလိုက်ပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ဘောင်းဘီကိုဇစ်ဖွင့်လက်လျှိုလိုက်တော့ သူဝတ်ထားတဲ့ boxer ကိုတွေ့တယ်။ ရင်ဘတ်ထဲ ပျို့ကနဲဖြစ်မိရသေး။ ရွှေပြွန်ကရေ တဖြန်းဖြန်းသွန်ပါတော့တယ်။ ပေါက်ပြီးပြန်တော့ သူ့ဟာကို အတွင်းပြန်ထည့် ဇစ်မပိတ်ဘဲ ယိုင်တိုင် တိုင်နဲ့ ဧည့်ခန်းထဲသွားကာ ဆိုဖာပေါ်ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်လေရဲ့။
ရေအတော်ဆာနေတာ အခုမှသတိရတယ်။ ညစာစားပြီးကတည်းက သောက်ချင်နေတာကို။ သူ့ကိုရေနည်းနည်း သောက်ချင်လို့ပြော တော့ မီးဖိုချောင်ထဲကိုယ့်ဖာသာစိတ်ကြိုက် ယူသောက်ပါတဲ့။ တစ်လက်စတည်းရေခဲသေတ္တတာ ထဲက နို့တစ်ခွက်လောက် သူ့အတွက် ငှဲ့ယူခဲ့ပါဆိုပဲ။ ဟင်း....ရေဖန်ခွက်ခပ်ကြီးကြီးထဲ ရေကြည်ကြည်လေးတွေငှဲ့ ထည့်၊ ပြီးတော့သူ့အတွက်နို့တစ်ခွက်ထည့်ကာ သူ့ဆီလှမ်း ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာနေတာကြောင့် အိပ်ချင်သလိုလိုဖြစ်စပြုလာပါပြီ။ ကိုခိုင် ထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာအစွန်းမှာထိုင်ရင်း သူ့ဆီနို့ ခွက်လှမ်းပေးလိုက်တော့ သူက အတူတူ တီဗီကြည့်ကြတာပေါ့တဲ့ မအိပ်သေးခင်လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက သူဒီအတိုင်းပြောစေချင်နေ တာ ဒီအချိန် မှာ။ ကားမောင်းအိမ်ပြန်ဖို့ အဆင်မပြေတော့တဲ့ ကာလဖြစ်နေပြီ မဟုတ်လား။ ဆိုဖာပေါ်မှာ လှဲအိပ်ရတာ ပိုသင့်တော်တယ် လေ ကျွန်တော့်အတွက် ဒီညဟာ။ ကောင်းတာပေါ့ ဟုဆိုလိုက်တော့ ၀မ်းပမ်းတသာနှင့် တီဗီထဖွင့်လေရဲ့။ channel လိုင်းတွေဟိုသည် ပြောင်းဖွင့် ရင်း ခဏကြာတော့ Porn movie ကြည့်ရအောင်တဲ့ သူသောက်ထားတော့ စိတ်ထဲနည်းနည်းကြည့်ချင် စိတ်ဖြစ်နေပါသတဲ့။
သူရှေ့မှန်စားပွဲပေါ်က ရီမုဒ်ကိုထယူကာ VCR ကိုဖွင့်ပါတော့တယ်။ ရုပ်ရှင်က တစ်ပိုင်းတစ်စဖွင့်လက်စကြီးပဲ။ ၀ိုး.....ခပ်တောင့်တောင့် ဘဲကြီး တစ်ပွေက သင်္ဘောပေါ်မှာ စော်တစ်ပွေကို ကစ်နေတာမိုက်မှမိုက်။ အဲဒီက အတော် hot တာပဲဗျ။ စိတ်ထဲ အဲဒီဘဲကြီးဟာ ကျွန်တော် ဖြစ်သွား ပြီး ထွားအိတဲ့အသားဆိုင်ထဲ ငပဲကို လျှောကနဲသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်....အိုး....ဖီးလ်ပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ မာတောင် စပြုလာ ပါပြီဆို တော့ကာ ဘောင်းဘီထဲ အသာနေရာချပြီး မသိမသာ ကိုခိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီး လက် ကစားနေ တယ်။ ခဏကြာတော့ သူ့ဘောင်းဘီကိုလျှောဖယ်ကာ အပြင်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဟူး.....အတော်ကြီးတဲ့ဟာ။ အနည်း ဆုံး ၆ခွဲ ကျော်မယ်။ ပြီးတော့ တုတ်လည်းတုတ်တယ်။ ဆိုဖာကိုနောက်မှီလျှောထိုင်ကာ ရုပ်ရှင်ကိုကြည့် ထုပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်က တော့ အတွင်းမှာပဲ လက်လျှိုပြီးကစားနေဖြစ်သပေါ့။
'အပြင်ထုတ်လိုက်စမ်းပါကွာ.....အေးဆေးပေါ့' ဘာလည်း လာထားဆိုပြီး အပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း ကိုခိုင်နှင့်အပြိုင် ဗုံတံခေါက်ပါ တော့တယ်။
'ဇာနည်ကူညီပါဦးကွာ....ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပေးပါဦး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သိပ်မဖြစ်လို့၊ ဒါပေမဲ့ ငါမတ်တပ်ရပ်ဖို့ ခက်နေလို့ပါ ' ကျွန်တော် လည်း သူ့ဆီလျှောက်သွားရင်း ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ ဘောင်းဘီကကြယ်သီးတွေဖြုတ် ခါးပတ်ကိုဆွဲဖြုတ်ကာ ဘောင်းဘီကိုလျှော ချွတ်ပေးရပြန်တယ်။ ဆိုဖာပေါ်မှာ boxer ကိုယ်စီလေးတွေနဲ့ထိုင်ရင်း ကိုယ့်ဖာသာ ဗုံခေါက်တမ်းကစားကြရသည်ပေါ့။
TVပေါ်က scene ကတော့ချိန်းသွားပါပြီ။ ခပ်ထွားထွားပျိုမေက ဇာတ်လိုက်ကျော်ကို ပုလွေမှုတ်နေသလေ။ ကိုခိုင်က 'ဒီစော် ပုလွေဘယ် လိုမှုတ်ရတယ်ဆိုတာ မသိဘူးကွ၊ အဲဒီဘဲကို ကျီစယ်တာကျနေတာပဲ'။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲ ထင်တယ်။ မိန်းကလေး တော်တော်များများ ပုလွေမှုတ်တာမှာကောင်းအောင် မမှုတ်တတ်ကြဘူး။ ကိုခိုင်ပြောတာကို သဘောတူရင်း ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက စော်တွေ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ erotic spots အကြောင်းကို သေချာ မသိကြဘူးဆိုတာ။
ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်ပြီးထုနေကြတာသုံးလေးမိနစ်ကြာတော့ ကိုခိုင်က စလာတယ်။ 'ဇာနည် ဘဲတစ်ပွေအတွက် အဲဒီလို လုပ်ပေးနိုင်မလား' သူ့စကားက ထူးဆန်းလှလျည့်။ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားဖူးဘူး။ ကိုယ့်မှာလည်း ဒီပစ္စည်းရှိတာပဲ။ သူများပစ္စည်း......အဲ မိန်းကလေးဆိုရင် လည်း ဘာဂျာမှုတ်ပေးရဟုတ်သေး။
'အင်း.....သိဘူးဗျ၊ စိတ်ထဲအရမ်းထလာရင်တော့ပြောတတ်ဘူး စမ်းသပ်မိကောင်းစမ်းသပ်မိမယ်ထင်တယ်'
ခပ်ရဲရဲဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာ၊ ဟပြဲဖြစ်နေတဲ့ ရင်ဘတ်ကချွေးဥတွေ ၊ နောက်...ကျွန်တော့်လက်ထဲ မြှုပ်ချည်ပေါ် ချည်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို သူစိုက်ကြည့်ပြီး သူ့စိတ်ထဲမရိုးမရွဖြစ်လာသလားမသိ။ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နားတိုးကပ်လာပြီး 'မင်း -ီးကို ကိုင်ကြည့်လို့ရမလား ငါဘယ်တုန်းကမှ တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့ –ီးကို မကိုင်ဖူးဘူးကွ' တဲ့။
ကျွန်တော်ကဘာပြောရမှာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန် ဘယ်သူလာပြီးကိုင်တွယ်ပေးမလည်း ခွင့်ပြုမိမှာပင်။ ဒီတော့ အသာခေါင်း ဆတ်ပြရင်း ဆက်လုပ်ကိုယ့်ဆရာပေါ့။သူကျွန်တော့်နားအမြန်ကပ်လာပြီး သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်ပါတော့တယ်။ ထိပ် ဖျားလေးကို လက်ထိပ်ကလေးနှင့် အသာပွတ်ပြီးနောက် လက်ကိုအပေါ်အောက်လှုပ်ရှားပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေ အသာ မှေးမှိတ်လိုက်မိပြီး လွန်ခဲ့တဲ့အပတ် လောက်က စော်တစ်ပွေနှင့်ဒိတ်ပြီး ကဲခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကို စိတ်ထဲပြန်ခံစားမိရသပေါ့။ ပြည့်ဖောင်း လက်သွယ်သွယ်၊ နူးညံ့တဲ့ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ပေးမှုလေးတွေအဖြစ် မြင်ယောင်မိသည်လေ။ 'ငါ...စိတ်ထဲ အရမ်းဖီးလ်လာနေပြီကွာ.... ဒီထက်ပိုပြီး အရသာခံစားချင်တယ်....ရမလားက'ွ သူ့ပထမဦးဆုံး _ီး တစ်ခုရဲ့အရသာကို စမ်းသပ်ချင်သတဲ့။ မတားပါဘူး လုပ်ပေါ့။ အသက်ရှူငွေ့လေပူနွေးနွေးတွေ ကျွန်တော့်ကွမ်းသီးခေါင်းရဲ့ထိပ်ဖျားဆီက ရလာမိပြီးနောက် သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားများရဲ့ နူးညံ့မှုကို စတင် ထိတွေ့ရပါပြီ။ ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာငုံထွေးပြီး.....ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျှောချလိုက်တာ အာခေါင်ထဲထိ။
သူ့လည်မျိုထဲထိသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်ကစားပေးနေရင်း လျှာဖျားလေးတွေက ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်က အသားနုလေးတွေကို ကလိ တော့တာ။ စိုစွတ်ပူနွေးတဲ့သူ့လျှာဖျား၊ လျှောကနဲဝင်ဝင်သွားတတ်တဲ့ အာခံတွင်း အတွင်းပိုင်းရဲ့ ပြုစုမှုတွေဟာ ကျွန်တော့်အား တခြား အတွေ့ကမ္ဘာသစ်ဆီခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
ကိုခိုင်ရဲ့ အပြုအစုကောင်းလေးတွေရနေစဉ်ခဏ သူ့ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး 'ဘယ်လိုခံစားရလဲ?' အမေးထုတ်တယ်လေ။ အိုး....အဲဒီ ဖီးလ်က အရမ်းမိုက်တယ် စော်တွေနဲ့တုန်းက အဲဒီဖီးလ်ကို မခံစားခဲ့ရဖူးဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူက တစ်ဆင့်တက်လာ တယ်။ သူ့ငပဲ ကို အဲဒီလိုစမ်းပြီးပြုစုကြည့်ပါလားတဲ့။ ကျွန်တော်....ကျွန်တော်လည်းပဲ စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်ချင်မလား၊ ပြီးတော့ မိန်း ကလေးပြုစုတာနဲ့ ယောက်ျားလေးလုပ်ပေးတာဘာကွာခြားလဲ အဲဒီ့ဖီးလ်ကိုခံစားကြည့်ချင်လို့ဆိုပဲ။ ကျွန်တော်ခဏစဉ်းစားကြည့်ပြီး 'အိုကေ လေ.... ကျွန် တော်ခဏတော့စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်'လို့ဖြေလိုက်မိပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရာရောက်မလား တွေးမိသွားလို့ပါ။
သူ့ငညိုတုတ်ထွားထွားကို အသာကိုင်လိုက်တော့ pre-cum တစ်ချို့ထွက်စပြုပြီ။ လျှာကိုမရဲတရဲထုတ်ပြီး အဲဒါလေးကိုလျှက်ကြည့်မိ လိုက်တော့ sweet and sticky ။ပါးစပ်ကို အသာဖွင့် သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကိုစုပ်မျိုလိုက်စဉ်မှာတော့ ယောက်ျားအနံ့စစ်စစ်ကို သူ့ငညို ကရလိုက်တယ်။ ရင်ထဲတစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်စေနိုင်သားပါ။ သူ့ငညိုထွားထွားကို ပါးစပ်ထဲပိုမိုသွင်းယူလိုက်ပြီး ခေါင်းကိုအသာလှုပ် အထုတ်အသွင်းခပ်ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပေးလိုက်တော့ ကိုခိုင် ပါးစပ်က ညည်းညူသံတစ်ချို့ ထွက်လာတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သူ့ငညိုကို အသာအယာဆက်ပြီးစုပ်မျိုနေဖြစ်သလို လက်ကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် ငပဲကို ကိုယ့်ဖာသာကိုင်ကာ ခပ် ဖြည်းဖြည်းထုနေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုခိုင် သူ့ငညိုကို လည်ချောင်းထဲရောက်အောင် အသာထိုးထည့်လိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်အရှိန်တက်နေ ရာကနေ 'I'm ready to shoot!' တဲ့။ ကိုယ့်ဖာသာတွေးလိုက်မိတာက သူ့ငညိုကို ဆွဲထုတ်ပစ်ရမလား? သူ့ဟာကို ကျွန်တော့်ပါးစပ် ထဲပန်းထည့်ခွင့်ပေးပြီး သူ့ man juice ရဲ့အရသာကိုမြည်းစမ်းကြည့်ရမလား? ဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့ငညိုကိုစုပ်မြဲ မှုတ်မြဲ လုပ်လိုက်တာ သူခါးကို တစ်ချက်ကော့ ကာ ပါးစပ်ထဲအဆုံးထိထိုးထည့်လိုက်ကာ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ အရသာက မုန်းစရာ တော့ နည်းနည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးက မကျေနပ်စရာတော့ ဟုတ်ဟန်မတူခဲ့။ သူပန်းထုတ်ပြီးသွားချိန်အထိ ကျွန်တော် သူ့ငညိုရဲ့အရသာကိုစမ်းသပ်ရယူချင်နေတုန်းပါ။ ဒါပေမဲ့ သူက ပန်းထုတ်လည်းပြီးရော ဆိုဖာပေါ် ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်လိုက်တော့တာ။
ရုပ်ရှင်ကိုဆက်ကြည့်တော့ရင်ထဲအတော့်ကို ဆာလောင်နေတဲ့ဖီးလ်ကိုခံစားရတယ်။ စော်တစ်ပွေများအနားမှာရှိလို့ကတော့ တဘောင်း ဘောင်းမည်သွားမှာအသေချာ။ ရုပ်ရှင်မှာ စော်ကဘဲကြီးပေါ်တက်ခုန်နေတာဗျာ။ ငပဲကြီးက ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်။ 'ရှီး....good' ရုတ်တ ရက် ကိုခိုင် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ယူလိုက်တာ အာခေါင်ထဲအထိ။ ပြီးတော့ခေါင်းကို အပေါ်အောက် ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှား ပေးတော့တာ။ အရှိန်ရနေတဲ့ကျွန်တော့် balls တွေထဲက တင်းကနဲ တင်းကနဲဖြစ်ပြီးနောက် သူ့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထုတ်လိုက်မိတော့တယ်။ ကျွန်တော် ပန်းထုတ် လိုက်ပေမဲ့ သူကတော့ဆက်ပြီးစုပ်မြဲ အဲဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့ 'အာ...အ...အ' တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ ဒုတိယ အကြိမ် တဆစ်ဆစ်ပန်း ထည့်မိပြန်ရော။ မပျော့သွားမခြင်းလွှတ်မပေးတဲ့ ကိုခိုင်ဟာ အတော်ကြာမှ လွှတ်ပေးပါတယ်။
'Wow, man, that was awesome'
ကျွန်တော်ဆိုဖာပေါ်မှာ ပြန်ထိုင်ရင်းခဏအကြာမှာတော့ ဦးခေါင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းငိုက်ကျလာရင်း နောက်ဆုံး အိပ်ပျော်သွားပါတော့ တယ်။ (၃)နာရီခန့်ကြာပြီးနောက် ရုတ်တရက်နိုးလာကာ ကိုခိုင့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဆိုဖာရဲ့တစ်ဖက်စွန်းမှာ လှဲပြီးအိပ်ပျော်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ဘောင်းဘီတိုဟာ ခြေချင်းဝတ်မှာချိတ်လျက်၊ သူ့ငညိုထွားထွားဟာလည်း သူ့ပေါင်ပေါ်မှာ အသာလှဲလျောင်းလျက်။ TV ကလည်း ဖွင့်လျက်သား ပျားအဖြူရောင်တွေ တ၀ီးဝီးပျံသန်းနေရဲ့။ အဲဒါနဲ့ TV remote ကိုကောက်ယူပြီး ပိတ်ပစ်လိုက် သပေါ့။
အတန်ကြာထိုင်နေရင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို oral ပေးခဲ့သလို အဲဒီအမျိုးသားက လည်း blow job ပြန်ပေးတယ်။ အဆုံးသတ်စဉ်းစားမိတော့ ကျွန်တော်ဟာ straight တစ်ယောက် ပြီးတော့သူဟာလည်း ယောက်ျားစစ် စစ်။ ကိုခိုင်အိပ်ပျော်နေစဉ်ခဏ ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတွေးကြည့်မိရင်း မရဖူးသေးတဲ့ ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်စဉ်းစား မိပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အံ့သြရပါတယ် ဒီအဖြစ်ကို။ အာခေါင်ထဲက ရေဆာသလို ငတ်မွတ်မှုဖြစ်လာပြီး... ..ဟူး....ဆိုဖာပေါ် လှဲပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ ကိုခိုင့်ဆီလှမ်းသွားမိပါရော။ ပြီးတော့.......ငညိုထွားကို အသာကိုင်ကြည့် နောက်ဆုံး ပါးစပ်ကို အသာဖွင့်ကာ ငုံ ထွေးမိလိုက်ပါတော့တယ်။
နူးညံ့ပူနွေးတဲ့ သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်လျှာကို ၀ဲလှည့်စေပြီးကလိမိစဉ်ခဏမှာတော့ သူ့ငညိုဟာ တဖြည်းဖြည်းမာသထက်မာလာပါ တော့တယ်။ သူ့ရဲ့အသက်ရှူသံအရ သူအိပ်ပျော်နေဆဲဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့အတင့်ရဲပြီး ပိုမိုပြုစုမိတာမှာ သူ့တင် ပါးတွေဟာ အလိုက်သင့်လှုပ်ရှားလာပြီး ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းပြုပါတော့တယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အာခေါင်ထဲရောက်တဲ့ အထိ အဆုံးထိကပ်ကပ်ထည့်တာ အသက်ရှူမှားမတတ်ဖြစ်ရပါသေးရဲ့။ သူ့အသက်ရှူသံတွေဟာ ပိုမိုလှုပ်ရှားလာပြီးနောက် သူ့လက် အစုံဟာ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုကိုင်ကာ သူ့ငညိုကို အထုတ်အသွင်းဆက်တိုက်ပြုလာတာကြောင့် သူမကြာခင် အထဋ်အထိပ်ရောက် တော့မယ်ဆိုတာ သိရပါပြီ။ 'အာ...အ...အား' နောက်ဆုံးတစ်ချက် အာခေါင်ထိဖိကပ်ထည့်လိုက်ပြီး သင်္ကြန်အမြှောက်လို ပန်းထည့်လိုက် ပါတော့တယ် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုညှပ်ကိုင်ထားတာ အသာလွှတ်ပြီးစဉ်အခါမှာတော့ သူက 'That wasasurprise' တဲ့ပြောပါရဲ့။
ဆိုဖာပေါ်ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက် အိမ်ပြန်ဖို့ကောင်းပြီလို့ကိုယ့်ဖာသာတွေးမိရပါတယ်။ အခု မနက်၎နာရီထိုးပြီဆိုတော့ အိမ်ပြန် ဖို့လိုပြီလေ။ ရေမိုးချိုးသန့်ရှင်းပြီး အလုပ်ကို ၇နာရီခွဲလောက်သွားရမှာ မဟုတ်လား။ ပြန်ဖို့ ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတာကိုကြည့် ပြီး ကိုခိုင် က 'မင်းဒီနေ့ဘာနေ့ဆိုတာ သတိရရဲ့လား၊ ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့လေ။ ငါတို့အားလဲုံးပိတ်တယ်' အိုး.....ကျွန်တော် တကယ့်ကို လုံးလုံးလျား လျားမေ့သွားတာ။
တံခါးနားအသာရပ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပုခုံးဖက်ကာ မင်းအနားယူဖို့သင့်နေပြီကွ၊ 'လာ....ငါနဲ့အိပ်ယာကိုလိုက်ခဲ့' သူ့အိပ်ခန်းကိုလိုက် ခွင့်ပေးပြီး အနားယူစေပါတယ်။ မအိပ်ခင်အ၀တ်တွေကိုချွတ် အိပ်ယာပေါ်အသာလှဲအိပ်ရသည်ပေါ့။ ဒီအခါ သူလည်း ကျွန်တော့်ဘေးမှာ လှဲလျောင်းပြီးနောက် ကျွန်တော့်အပေါ်လက်မောင်းများတင်လျက် အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နှစ် ခြိုက်ခြိုက်ကို အိပ် ပျော်သွားတော့တာ။ အိပ်ယာကနိုးထချိန်မှာတော့ အ၀တ်တွေဝတ် ကိုခိုင်ကို တနင်္လာနေ့မှတွေ့မယ်လို့ နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါရဲ့ ကျွန် တော့်အိမ်ဂေဟာကို။
ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ရဲ့ အစဦးတနင်္လာနေ့ရောက်ခဲ့ပြန်တော့ ထုံးစံအတိုင်းရုံးကိုသွားသည်လေ။ ရုံးခန်းတံခါးကိုဖွင့်ကာ အထဲဝင်ပြီး နောက် မျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ ကိုခိုင် သူ့အခန်းငယ်လေးထဲအလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဝင် လာတာကို သူမြင်သွား ဂရုပြုမိသွားချိန်မှာတော့ 'Good morning, ဇာနည် ဒီညအတွက် ဘာအစီအစဉ်ရှိသေးလဲ?'
'Good, let's get drunk again tonight.'
Wrote by Alex Aung (26 Jan 2010)
Posted by Alex Aung at 7:00 PM No comments:
Drunken Roommate (Ending)
ပန်းမြို့တော်ဟာ အတော်တော့အေးချမ်းသားပင်။ ရာသီဥတုကလည်း အေးမြမြ ပန်းမျိုးစုံကလည်း နေရာအနှံ့မှာပွင့် တတ်သည်။ ကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးကတော့ ဆောင်းရာသီမှာ ပွင့်တတ်သော ချယ်ရီပန်းများပင်ဖြစ်သည်။ ဂျပန် ချယ်ရီများလို့ အပွင့်မကြီး ခပ်သေးသေးပွင့်တတ်ကြသည်။ ချယ်ရီနှင့်အတူ သဘောမကျတာကတော့ ခူယားကောင် များဖြစ်သည်။ ချုယ်ရီပင်များမှာ ခူယား ကောင်များကတ်နေတတ်တော့ ကျွန်တော် ချယ်ရီပင်ပေါ်တက်ကြည့်ရင် ယား ယံပြီး အဖုအပိမ့် ထရတာ ဆေးသောက်ရတာ ဖြစ်ဖြစ်နေရလို့ဖြစ်မည်။ အိမ်ခြံဝင်းရဲ့ ခြံစည်းရိုးတလျှောက် ချယ်ရီပင် များနှင့် ယူကလစ်ပင်တွေကတော့ မိုးထိုးနေကြသည်။
ဒီမြို့လေးမှာ နေပြီး စာကျက် ကျူရှင်တက်နှင့်အတော်ကိုအဆင်ပြေပါသည်။ မန်းမြို့တော်မှာလို သူငယ်ချင်းများစွာ တရုန်းရုန်းမ၀င်မထွက်ကြသည့်အတွက်လည်း စိတ်ရှုတ်သက်သာရ သလို စိတ်မလေဘဲ စာတွင်အာရုံနှစ် လိုရရနေ တော့၏။ လပတ်စာမေးပွဲများ၊ အပတ်စဉ်စာမေးပွဲများကို စာသင်ဝိုင်းများတွင် ဖြေဆိုနေရသည်တွင် အဆင့် ၁ ကနေ ၅အတွင်း ပုံမှန်လည်ပတ်နေရတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အတော်ကောင်းမွန်သည်ဟု ဆိုနိုင်သလို သူရိန်သည်လည်း အဆင့် ၁ ကနေ ၁၀ အတွင်းရနေသည့်အတွက် သူ့အိမ်မှာ ကျေးဇူးအထူးတင်နေကြသည်ပဲ။
ကျွန်တော်နှင့် သူရိန်ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည် သူငယ်ချင်းဆိုလည်းဟုတ် အရင်းနှီးဆုံး ဟုတ်သည် အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း တပူးတွဲတွဲဖြစ်နေကြပြီ။ မနက်ခင်းခပ်စောစော အိမ်မှာ မစားချင်လို့ ဈေးလေးထဲသွားပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲစား ဖက်ထုပ်ရည်ဖျော်သောက်ကြရင်လည်း အကြိုက်တူ။ စာသင်ဝိုင်းသွားလို့ တစ်ယောက်က စာလိုက်ကူးနေရင် တစ် ယောက်က စာရှင်းတာကို သေသေချာချာလိုက်နားထောင်သည်။ အိမ်ရောက်လို့ စာသင်ဂိုက် မရောက်ခင် စာတွေ အတူနွှေးပြု တော့လည်း ဂရုတစိုက်။ အို..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ တစ်သက်လုံးဒီလိုနေသွားလို့ရနေသည်ပဲ ဘယ်သူမှ ခွဲကြလိမ့်မည်မဟုတ်။
'ငါလား....နို့ပဲသောက်တော့မယ် ကွေကာဖတ်တွေတော့ထည့်ထားတယ်ကွ သောက်ဦးမလား'
မကြာခင်သော ကာလမှာ ဘ၀အတွက်အရေးကြီးသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကိုဖြေကြရတော့မှာ။ ကျွန်တော် တို့အတွက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေကြပြီ။ ညတစ်ရေးနိုးချိန်မှာတောင် သူရိန် ကော ကျွန်တော်ကောနိုးနေရင် ပါးစပ်ထဲရှိတဲ့စာကို အတူရွတ်ဆိုဖြစ်ကြသည်အထိ။ ဘော်ဒါဆောင်မှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားနေကြသည့်ကျွန်တော် တို့လို စာမေးပွဲဖြေမည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အတွက်တော့ စာမေးပွဲတွေအကြိတ်အနယ်ဖြေနေကြရသလိုမျက် တွင်းဟောက်ပက်လေးတွေနှင့် ဇီးကွက်လေးတွေလိုပင်။
'သူရိန်...သူရိန် မင်းမီးဖိုချောင်ထဲမှာ မဟုတ်လား....မနက်က အိမ်ကပို့လိုက်တဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် ထဲက ကိုရီးယား ပဲခေါက်ဆွဲထုပ်တွေ ပါမပါကြည့်လိုက်ဦး....ငါ မာမီ့ဆီဖုန်းခေါ်နေတယ်ကွ'
'အေး.....အမ်......ပါတယ်ကွ အဲဒါက တစ်ဖာ၊ မြူစွမ်က နှစ်ဖာ၊ ပန်းသီးတွေက...ဂွတ်တယ်ကွာ နီရဲနေတာပဲ'
'မာမီ...သားပါ.....ဟုတ် နေကောင်းတယ်၊ စာတွေလား အိုကေပါတယ်မာမီ၊ ဦးချစ်တို့လား ဂရုစိုက် ပါတယ် မာမီ၊ ဟီး ဟီး.....ဟိုဟာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲကို ငရုတ်သီးနိုင်းချင်းလေးပဲထည့်စားတာပါ၊ နောက် စားတော့ဘူးနော်....ဟုတ်.. သူရိန်.. .သူရိန်.. ..မင်းအမေက စကားပြောချင်လို့တဲ့....'
'လာပြီ လာပြီ......အမေလား....သားစာလိုက်နိုင်တယ်ဗျ အင်း.....အင်းပါ သားပြည့်စုံပါတယ်၊ မာမီထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ငပိကျော်ပုလင်းလည်းတွေ့တယ် အမဲသားခြောက်ထောင်းကြော်လည်း တွေ့တယ်......ဟုတ်ပါဗျ'
ညနေခင်း အိမ်ရှေ့လမ်းမက မာကျူရီမီးလုံးတွေတောင် ထွန်းလင်းစပြုနေပြီ။ မလှမ်းမကမ်း ရပ်ကွက် ထဲက လူငယ် တချို့က ညခင်းလမ်းဘေးက အုတ်ခုံလေးတွေမှာ တီးဝိုင်းဖွဲ့ဖို့ပြင်နေကြတာကို ပြတင်း ကတစ်ဆင့်မြင်နေရသည်။
ဟော......နှင်းမှုန်လေးတွေ တဖွဲဖွဲကျဆင်းလာပြီ။ ပြတင်းက ယူကလစ်နံ့သင်းသင်းလေးတွေ ရနေတဲ့ ပြတင်း ပေါက် အား အအေးမပိုအောင်ထပိတ်ရတော့မည်။ သူရိန်အလွမ်းသည်နေသည်မှာ မပြီးတော့ အတော်ချစ်ဖို့ ကောင်းသည့် ကောင်....။
နောက်ဆုံးတော့လည်း သူရိန် ကျွန်တော့်အိပ်ယာကနေထသွားသည်။ သူထသွားမှ ကျွန်တော်အတန်ကြာ လှဲလျောင်း ပြီးအိပ်ပျော်သွားရတာကို အမှတ်ထားမိရသည်။ မနက်ခင်းသေးပေါက်ချင်လို့ အိပ်ယာက နိုးလာသလိုမျိုး ဆီးအိမ်တင်း နေသည့်အလား ခံစားလာရသည်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်မသိ။ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ သူရိန် တံခါးဖွင့်ပြီးအပြင်ထွက် သွားသည်။ သူ့ခါးမှာအဖြူရောင် brief တစ်ထည် ၀တ်လို့ပေါ့။ ပါတီကိုများပြန်သွားသလား။ ဒီလိုအ၀တ်အစားနဲ့တော့ မသွားလောက်ပါဘူးလေ။ ကျွန်တော်ရောထပြီး လိုက်သွားရကောင်းမလား။ အိပ်ယာပေါ်မှာ နှစ်မိနစ်လောက် ဆက်လှဲ ရင်း ဟန်ဆောင်မူးပြရင်း ရရှိခံစားခဲ့ရတာတွေကို တွေးနေမိကျေနပ်မိနေသည်။ မရတော့ဘူး.... ပေါက်ချင် လှပြီ။ ခုတင်ခြေရင်းက ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုကောက်ဝတ်တော့ သေးပေါက်ချင်လို့ မာနေတဲ့ ငပဲကို လုံအောင်မဖုံးနိုင်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူရိန်အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ်။
သူ့မျက်လုံးတွေဝိုင်းပြီး အံ့သြသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က အမူးပြေစလူတစ်ယောက်ရဲ့ဟန်နဲ့ မျက်လုံးခပ်မှေး မှေးလုပ်ကာ 'Gotta piss' လို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့။ ပြောလိုက်တဲ့စကားနဲ့ညီအောင် ခပ်ယိုင်ယိုင်ထ ရပ်ရင်း သူ့ကို လှမ်းကြည့်ရတာ။ သူ့လက်ထဲမှာ ရေစိုဝတ်တစ်ခု၊ သူကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ဟာတွေ ကို သန့်ရှင်းပေးမလို့ထင်ပါ့။ ခြေလှမ်းတွေကို သူ့စီလှမ်းလိုက်ရင်း တစ်ယောက်တည်းသွားလို့မရ သေးတဲ့ပုံချိုးလိုက်တယ်။နည်းနည်းယိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို တွဲဖက်ရင်း အခန်းပြင်ကိုသူလိုက်ပို့ တာပေါ့။ မျက်လုံးမပွင့်တပွင့်နှင့် သူ့ကိုကြည့်ကာ 'ငါသောက်မိတာ များသွားတယ်ကွာ.....များသွားတယ်'
သူဘာမှမ၀တ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖမ်းထိမ်းလိုက်ရင်း 'မင်းကွာ....' ပဲပြောတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ် ယောက်လုံးအ၀တ်တစ်ခုမှဝတ်မထားဘူး အတွင်းခံဘောင်းဘီတိုလေးတွေကလွဲလို့။ ကျွန်တော့်ငပဲက အစွမ်းကုန်မာ နေဆဲပဲ အဲဒီဘောင်းဘီအောက်မှာ။ ကျွန်တော်မာနေတဲ့ ငပဲကို ကိုင်ပြီး ယားသလိုလိုနဲ့ ကုတ်လိုက်တယ်။ 'ရှီး...အလကား မာထောင်နေတာပဲ'
'Yeah, ဇာနည် မင်းဟာက မာနေတာ..ကဲ...အဲဒါကိုဘောင်းဘီထဲ ဒီလိုသွင်းရတယ်'
သူရိန်ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင် ဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကိုဟပြီး နေရာချပေးတယ်။ အိုး....သူ့လက်တွေက နူးညံ့လိုက်တာ...။ နောက်တစ်ခါလွှတ်ဖို့အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကိုကိုင်ပြီး ဘောင်းဘီထဲ ထည့်ပေးစဉ်ခဏ အတော့်ကို မိုက် တယ်။
ပါးစပ်က ပလုံးပထွေးပြောရင်း တံခါးမဆီ ခပ်ယိုင်ယိုင်ဦးတည်လိုက်တယ်။ နောက်အစီအစဉ်တစ်ခု လုပ်ဖို့ ကျွန်တော ဗျူဟာ စကျင်းလိုက်သည့်သဘော။ 'ငါသေးပေါက်ချင်ပြီကွာ'သူရိန်ကျွန်တော့်ကိုတွဲပြီး အိမ်သာရှိရာကိုလိုက်ပို့တယ်။ ဒီအခန်းမှာ ရေချိုးခန်းရှိပေမဲ့ ကျွန်တော်က အနည်းငယ်ပိုကျယ်တဲ့ ဒယ်ဒီတို့အခန်းထဲကဟာကိုမှ သုံးတာကြောင့် သူလိုက်ပို့တာပါ။ urinal ဆီသွား သေးပေါက်ဖို့ ငပဲကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ပျော့နေပြီ။ သေးပေါက်ဖို့တော့ ကျွန်တော့် ဖာသာ ထိန်းနိုင် ပါရဲ့။ ဆီးအိမ်ထဲက ဟာတွေအကုန် ရွှေပြွန်က ရေသွန်ပစ်တာ နေရထိုင်ရအတော် ကောင်းသွား တယ်။ ဟီး.. ..ဟီး သူရိန် ကျွန်တော်လုပ်နေတာတွေကို စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ မကြည့်ဘဲ၊ လဲကျမသွားအောင်သာ ဖေးမထားသည် ပေါ့။
သေးပေါက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုတွဲထားတဲ့လက်တွေကို အနည်းငယ်ရုန်းလိုက်ရင်း ဘေးဘီကိုကြည့် ကာ ရေချိုးချင် ကြောင်း ကြေငြာလိုက်တယ်။
ရေချိုးခန်းမှန်တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်ရင်း အထဲဝင်လိုက်တာ ကြွေပြားက ပြောင်ချောနေတော့ ကျွန်တော့်မှာ ကိုယ့်မူနဲ ကိုယ် ယိုင်လဲပြီး နံရံနဲ့တိုက်မိသွားရပါတယ်။ သူလည်းကျွန်တော်နှင့်အတူ ရေချိုးစေချင်လို့ ဟန်ဆောင်လိုက်တာဖြစ် ပေမဲ့ နာတာကတော့ တကယ်။ သူရိန် ကျွန်တော့်ကို ဖမ်းဆွဲ လိုက်ရင်း လဲမသွားအောင်ထိန်းပေးတယ်လေ။ သူ့ခမျာ မနိုင်လို့လက်လျော့ထားဟန်နဲ့ အဟိ...။
ဘယ်ရမလည်း 'ငါရေချိုးမယ်ကွာ' လို့ပလုံးပထွေးပြောပြီး ၀တ်ထားတဲ့အတွင်းခံကို ဆွဲချွတ်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချ လိုက်တာပေါ့။
'Ok, Come on, here'sashower'
ဒီလောက် ရာသီဥတုကအေးနေတာ သူငြင်းမှာပဲလို့ ကျွန်တော်ထင်မှတ်ထားပေမဲ့ သူကျွန်တော့်ကို အလိုလိုက်ပါ တယ်။ သူ့လက်အစုံကိုဆွဲယူလိုက်ပြီး ရေပန်းအောက်ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တော့တာပေါ့။ ရေပန်းက ဘန်းကနဲ အများကြီး ကျတာမှာ သူရိန်တစ်ယောက် 'အား.....အေးလိုက်တဲ့ရေတေ'ွ ဆိုပြီး အပူအအေးထိန်းခလုပ်ကို လှမ်းကိုင်ပြီး ညှိတော့ တယ်။ အေးအေးသက်သာချိုးလို့ရတဲ့ အပူချိန်ကို သူထိန်းညှိပြီးသွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ဆပ်ပြာတစ် တုံးရောက်နေပါပြီ။ တစ်ကိုယ်လုံး အမြှုပ်ဖွားဖွားပါအောင်တိုက်ရင်း အမူးသမားအမှားတစ်ရာ လုပ်တဲ့ဟန်ကို ဆက် ထိန်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက် တာပေါ့။ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေဖွားဖွားထနေတဲ့ ကျွန်တော့်လက်အစုံနဲ့ သူ့ဘောင်းဘီတို အဖြူပေါ် ကနေ တစ်စုံတစ်ရာကို ပွတ်သပ်ရှာဖွေလိုက်တယ်လေ။ မမာ့တမာလေးပေါ့ သူ့လျှို့ဝှက်တဲ့ဟာလေးက။
ကျွန်တော် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရင်း သူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ယူလိုက်တာမှာ မမာ့တမာ သူ့ငပဲက သီးမွှေးငှက် ပျောအလား ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဆပ်ပြာမြှုပ်အပြည့်နဲ့ ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ သူ့အတံကိုရော ဥတွေကိုရော ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လိုက်တာ သူမငြင်းသာပဲ အတွေ့မှာ မျောနေပါရော။ ညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်လိုက် သူ့အတံကိုဆွဲယူပြီး ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်လုပ်ပေးလိုက်တာ တဖြေးဖြေး မာသထက်မာလာပါတော့တယ်။
ဆီးခုံက အမွှေးနုလေးတွေ၊ နောက်တော့ သူ့ဗိုက်သားတွေ၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးတာ လည်း လုပ်သပေါ့လေ။ လက်တစ်ဖက်က သူ့balls တွေကို ပွတ်သပ်သလို တခြားတစ်ဖက်က သူ့ငပဲကို ခပ်ဖြေးဖြေး ထုးပေးလိုက်တာ သူ...'အား...အ....ရှီး' ညည်းညူသံတွေထွက်လာပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အသာထ ရပ်လိုက်ရင်း သူ့လည်ဂုတ်တွေ ပါးပြင်တွေကို နမ်းလိုက်တော့ သူကျွန်တော့်ကို အသာတွန်းကာ ငြင်းဆန်လို ဟန်ပြပါတယ် မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် သူ့နှုတ်ခမ်းပါးတွေကို စတင်နမ်းရှုံ့ချိန်မှာတော့ သူငြင်းဆန်မှု မလုပ်တော့ဘဲ တရှိုက်မက်မက် ပြန်နမ်းပါတော့တယ်။
အတန်ကြာ အနမ်းကြောမှာ နစ်မြောပြီး ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နားရွက်အနားကပ်လိုက်ကာ အမူးသံမရှိ ပုံမှန်လေသံဖြင့် 'တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ငပဲကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဆေးကြော ထားရင်လေ ငါရရှိဖူးတဲ့ဖီလင် ထက်ကောင်းအောင် ပြန်ပြီးပြုစုပေးလိုက်မှာ' လို့ပြောလိုက်တော့တာမှာ .....
မနက်ခင်း အာရုဏ်ဦးနေရောင်ခြည်ပေါ်ထွက်စ စာသင်ကျောင်းဝင်းတစ်ခုရဲ့ ကြော်ငြာဘုတ်တစ်ခု အနား နုပျိုသစ် လွင်သည့်လူငယ်လေးတွေ ခုန်ဆွခုန်ဆွနှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို စုပြုံတိုးဝှေ့ကြည့်နေကြ သည်မှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုး။ တစ်ချို့တွေက မျက်နှာကိုအောက်ဆိုက်ကျကာ ၀မ်းပန်းတနည်းဖြစ်နေကြ သလို ဘေးကနှစ်သိမ့်နေသူတွေ ကလည်း မရှား။ တစ်ချို့တွေကတော့ ခုန်ဆွခုန်ဆွနှင့် အော်ဟစ်ပြော ဆိုရယ်မော ပြောရွှင်နေကြသလို အတူပါလာတဲ့ မိဘ မောင်ဖွားတွေကလည်း အားရကျေနပ်နေကြဟန် များဖြင့်။
အဆိုပါ ကျောင်းဝင်းထဲသို့ ဆာ့ဖ်ကားတစ်စီးထိုးဆိုက်လာကာ ကားပေါ်မှ ခန့်ထည်လှသည့် အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦး အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးတို့ဆင်းလာကြသလို ကားနောက်ခန်းမှ အင်္ကျီဆင်တူ ၀တ်ဆင်ထားကြသည့် လူငယ်လေးနှစ်ဦး သည်လည်း ခပ်တုံ့တုံ့ဆင်းလာကြသည်။ ထိုနှစ်ယောက် ထဲမှ အသားအနည်းငယ်ပိုဖြူသူလူငယ်က ရှေ့ကအပြေး လေးသွားကာ ကြော်ငြာဘုတ်အား ကြည့်ရှုပြီးနောက် ၀မ်းသာအော်ဟစ်ကာ ပြန်ပြေးလာတော့သည်။ ထို့နောက် အတူ ပါလာသူများက အပြေးကလေးသွားရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးနောက် အားလုံးဝမ်းသာစွာဖြင့် ကားဆီသို့ပြန်လာကြသည်။
အပြုံးကိုယ်စီဆောင်နေကြသည့် ကားလေးထဲတွင် အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးသည် သား..သားတို့ ဆိုသည့် စကားတွေဖြင့် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပမည့်အကြောင်းနှင့် သားတို့ကို အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်များသို့သာ တက်ရောက်စေမည့်အကြောင်း ပြော ဆိုနေကြသလို အတူပါလာသည့် ကားမောင်းနေသော အမျိုးသားကြီးကလည်း စကားဝင်ရောက်မပြောပေမယ့် ပီတီ လွှမ်းနေသည့် အပြုံးမျက်နှာဖြင့် ရှေ့တူရှု ကြည့်ကာ ကားကို တငြိမ့်ငြိမ့်မောင်းနေတော့၏။
ဘယ်သူသိသိ မသိသိ ကိုယ်စီသိနေသည့် ရင်ခုန်တိမ်းမူးမှုများဖြင့် လက်ကိုအသာဆုပ်ကိုင်ထားကြ သည့် လူငယ်နှစ်ဦး၏ ရင်းနီးလွန်အမူအယာကိုတော့ဖြင့် အတူပါလာသူများက သူငယ်ချင်း တွေဆို သည့် အမြင်ဖြင့် ဘာမှမသိ... ...ဘာမှကိုမရိပ်မိ။
Wrote by Alex Aung
Posted by Alex Aung at 7:12 PM No comments:
လူနှစ်ယောက်.....တိတိပပဆိုရလျှင် လူငယ်လေးနှစ်ယောက်သည် နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်မြင့်တစ်လုံးရဲ့ လှေကားထစ်များ ရှိရာစီ တပူးတွဲတွဲလှမ်းစပြုနေတာကိုမြင်ရသည့်ညနေခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးသော လှေကားထစ်ကို စတက်ခါ စမှ တစ်ယောက်သောသူသည် ကျန်တစ်ဦး၏တွဲဖက် ထားခြင်းကိုလည်းကောင်း အနည်းငယ်ယိုင်နဲ့နေသည်ကိုလည်း ကောင်းမြင်နိုင်သည်။ နုနယ်သည့် မျက်နှာလေးတွေမှာ အနည်းငယ်ပန်းသွေးရောင်ထနေကြသလို သူတို့နှုတ်ခမ်းဖျား ဆီမှာ အနံ့အီအီတစ်ချို့ ပျံ့လို့နေသည်။
ပထမမြောက်လှေကား၏ တစ်ဆစ်ချိုး၊ နောက် ဒုတိယမြောက်လှေကား၏ တစ်ဆစ်ချိုးမှာတော့ အနည်းငယ်ပိုမူးသူ ဟုယူဆရသည့် လူငယ်၏ ကိုယ်လုံးအား တွဲခေါ်လာသည့် လူငယ်က တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တစ်ချက်ညှစ်လိုက်ကာ အနည်းငယ်စိုစွတ်နေသော နှုတ်ခမ်းအားငေးလျှက် လှေကားထစ်များဆီ ဆက်လက်လှမ်းတက်ပါတော့သည်။
အခန်းရဲ့တံခါးမအား အသာကိုယ်စောင်းတိုက်ဖွင့် တွဲခေါ်လာရသည့် လူငယ်အား အသာချလိုက်ကာ အခန်းလိုက် ကာတွေချ၊ မီးချောင်းတွေမှိတ် ညအိပ်မီးထွန်းကာ အခန်းတံခါးအား အဆုံးတိုင်ပိတ်လိုက် တော့သည်။ သူတို့တက် လှမ်းခဲ့ရာ လှေကားထစ်များတလျှောက် သင်းပျပျရီဝေေ၀အနံတချို့တွဲလိုခိုလို့ နေသည်။
အဖြစ်အပျက်ကတော့ ထူးထွေဆန်းပြားသည်မဟုတ်....ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားကြည့်လျှင် သဘာဝမကျဟု ဆိုရမည်ပင်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်ပေးသော စာသင်ဝိုင်းများ၊ ဘော်ဒါ ဆောင်များသည် တောင်လှေကားမြို့တော်လို့အမည်တွင်သည့် စိန်ပန်းပြာပန်းမြို့တော်၌ အများ အပြားရှိနေသည်မှာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပြန်ပါ။ ဒီမြို့တော်သည် ပန်းမျိုးစုံဖူးပွင့်သော ရေတံခွန် စိမ့်စမ်းပေါသော မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ နေထိုင်သူ မြို့သူမြို့သားများမှာ ရောင်းရေးဝယ်တာကိစ္စ များဖြင့် စီးပွားရှာကြသလို ပညာရေးအတွက် သားသမီးများကို စနစ် တကျသင်ကြားထိန်းသိမ်းပေး သော ဘော်ဒါဆောင်များတွင်အပ်နှံသင်ကြားလေ့လာ စေသောအလေ့သည်လည်း မသိမသာရှိကြသည်။ ဘော်ဒါဆောင်မထားလိုသူများကတော့ နာမည်ကြီးဆရာများဝိုင်းဖွဲ့သင်ကြားသော စာသင် ၀ိုင်းများ၌ အပ်နှံကာ အိမ်၌ စာသင်ဂိုက်များဖြင့်ကြပ်မတ်ကျက်မှတ်စေသည်။ ဆိုကြပါစို့ စီးပွားရှာဖို့လုံးပမ်း ကြသလို ပညာရေးအတွက်လည်း အာရုံစိုက်သောမြို့ကလေးလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံးမင်းနန်းဆိုက်ခဲ့ရာ အနုပညာရွှေမြို့တော်ကြီးကပါ။ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ရွာမှာလည်း နာမည်ကြီးစာသင်ဝိုင်းတွေရှိပေမဲ့ အရင်နှစ်ကစာမေးပွဲဖြေခါနီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးတစ်ခုသွားပြီးအပြန်မှာ အပြင်း ဖျားခဲ့တာကြောင့် စာမေးပွဲမဖြေခဲ့ရ။ မာမီက ဒီတစ်ခါ စာသင်နှစ်မှာတော့ အပေါင်းအသင်းဟောင်းတွေနှင့်လည်းပြန် စိတ်မလည်အောင် ပြီးတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် စာကျက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စိန်ပန်းပြာမြို့တော်ရှိ ဒယ်ဒီ့ အပန်းဖြေအိမ်မှာသွားနေကာ နာမည်ကြီး စာသင်ဝိုင်းတစ်ခုမှာ အပ်နှံပေးရင်းသွားရောက်နေ ထိုင်စေခဲ့ပါတယ်။ အပြင်ထွက်လည်လို့ရမယ် မထင် နဲ့နော် သူ့တပည့်တွေက အစောင့် အကြပ်အဖြစ်နေထိုင်နေတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကကျွန်တော့်ကို သူတို့ချစ်ကြပါတယ်။ ခြွင်းချက် အနေနဲ့တော့ ဒယ်ဒီလေ ကျွန်တော့်အိမ်ဘေးကပ်လျက်အိမ်က အဲလက်စ်ကိုပါ အတူနေပြီး စာလုပ် ခိုင်း ကျောင်းထားပေးတယ်ဆိုပါတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း အဖော်မရှိ ဖြစ်မှာ စိုးရိမ်တာ ကြောင့်လည်းပါမည်ထင်ပါတယ်။
မဆိုးပါဘူး စာကိုအာရုံစိုက်ကျက်နိုင်တယ်၊ ညနေစာသင်ဝိုင်းကပြန်လာရင် စာသင်ဂိုက်ဆရာ တစ် ယောက်ယောက် နဲ့အတူစာပြန်နွှေးကျက်မှတ်၊ ပြီးတော့တစ်ခါမရှင်းရင် အချင်းချင်းပြန်မေး ပြီးတွက် ချက်ကြပေါ့။ နောက်ကဖိအားပေး မဲ့သူမရှိပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နဂိုကတည်းက စာလုပ်ရတာ ကြိုက်တာ ကြောင့် အိုကေပါတယ်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အိမ်နီးနားချင်း သူရိန်ကလည်း မနှစ်ကတည်းက (၁၀)တန်းအတူတူတက်ခဲ့ပြီး အောင်စာရင်း ထွက်တော့ မြန်မာစာတစ်ဘာသာနဲ့ စာမေးပွဲကျတယ်လေ။ ပန်းမြို့တော်မှာ အေးအေး ချမ်းချမ်းစာသင်ရမယ့်အတွက် သူ့အိမ်ကလည်း အိုကေစိုပြေပေါ့။
မနက်ခင်းတွေဆိုရင် ၄နာရီကျော်လောက်ဆို စစ်တက္ကသိုလ်က ဗိုလ်လောင်းတွေ အပြေးလေ့ကျင့်တဲ့ တဟေးဟေး ညာသံပေးတဲ့အသံတွေကြောင့် နှိုးစက်မလိုပါ။ ပြင်ဆင်ပြီးသားမနက်စာကို စားလိုက် ရုံပင်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် ရေချိုး စာသင်ဝိုင်းသွား အချိန်ဇယားဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပေါ့။
သူရိန်က အတော့်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့လူပဲ။ အဲဒါကိုတစ်ခန်းထဲအတူတူနေရတဲ့အခါမှ ပိုသိရတယ်။ နှစ်ယောက်သား ယောက်ျားချည်းပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့သူက အခန်းထဲမှာအတွင်းခံဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ နေချင်နေတတ်သလို တစ်ခါ တလေ ရေချိုးခန်းတံခါးကိုပိတ်ချင်မှပိတ်တာ။ပြီးတော့ သူ့ကုတင်မှာ မအိပ်ဘဲ ကျွန်တော်နှင့်အတူတူလာလာအိပ် သေး။
စနေနေ့မတိုင်ခင်တစ်ရက် သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တစ်အိမ်အိမ်မှာစုပေါင်းပြီးစားသောက်ကြမယ်လို့ စီစဉ်ဖြစ်ကြ တော့မြို့ခံ စည်သူဝင်းက ကျွန်တော့်အိမ်ရဲ့ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာလုပ်ပါတဲ့ အစားအသောက်အတွက် သူတာဝန်ယူတယ် ဆိုတာ နဲ့ အဲဒီညက gathering party လေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မင်ဖို့တော့အကောင်းသားပါ။ တကယ့်ကိုစိတ်ထဲက လှိုက် လှိုက်လှဲလှဲပေါင်းသင်းတတ်ကြသူတွေပါပဲ။ ဘီယာတွေ၊ ဂျော်နီလမ်း လျှောက်တွေ၊SPY ၀ိုင်တွေနဲ့ပြီးတော့ မာလာဟင်း၊ မာလာငါးကင်တွေလည်း အလျှံ။
ကျွန်တော်က အရက် သောက်ရမှာကြောက်သလို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ တယ်။ အခုတော့ ဘော်ဒါကဏ္ဍအရ ဘီယာနှစ်ခွက်လောက်သောက်ရသည်ပေါ့။ဘီယာသာဆိုတယ် သောက်ပြီး ခေါင်းထဲ ရီဝေေ၀နဲ့ပါ။ သူတို့သောက် စားနေတဲ့ နေရာနဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းက ဆိုဖာတစ်ခုပေါ် အသာလှဲရင်း Relax လုပ်ရပါတယ်။
ဆိုဖာပေါ်လှဲပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ တဖြည်းဖြည်းလေးရင်းမှေးမှိတ်သွားမိပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဆိုဖာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ တစ်စုံတစ်ယောက် ကျွန်တော့်နားကပ်ထိုင်တာကိုသိလိုက်ရပြီး လက်တစ်ဖက်က ကျွန် တော့်ပခုံးကိုကိုင်ကာ 'Hey ဇာနည် နည်းနည်းရွှေ့ဦးကွာ၊ ဒါမှ ငါထိုင်လို့ရမှာ' လို့ပြောသံကြားလိုက်ရတယ်။ အသံ ကြားမှ သူရိန်ဆိုတာ အသေအချာ။ နည်းနည်းမှ ကျွန်တော် မလှုပ်ရှားဘဲ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။
သူရိန့်အနေ နဲ့ ကျွန်တော့်ပခုံးကို အတော်ထပ်လှုပ်ပေမဲ့ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မလုပ်ဖြစ်ပါ။ တခြားတစ်ယောက်က 'သူအ တော်မူးသွားပြီထင်တယ်ကွ၊ ဒီနေရာကခေါ်ထုတ်သွားတာ အကောင်းဆုံး ပဲထင်တယ်၊ တော်ကြာ ဟိုလဲဒီလဲနဲ့ ဒဏ် ရာရနေဦးမယ်' တဲ့ပြောသံကိုကြားရသေးတယ်။
သူရိန်ခမျာ စိုးရိမ်သွားသည်ထင်ပါ့။ 'ဒါဆိုလည်း ကိုယ့်ကိုကူညီပါဦး ကွာ'
လက်နှစ်စုံ...ဟုတ်တယ် လက်နှစ်စုံက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထွေးပိုက်လာကြတယ်။ စားသောက်နေ တဲ့အခန်း ထဲကနေ အိပ်ခန်းတစ်ခုထဲ မရွှေ့လာကြတာ။ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ငပဲကို အသေအချာကိုင်တွယ်သလို၊ နောက် တစ်ယောက်က ကျွန်တော့် တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ကြသေးတယ်။ မျက်လုံးတွေကိုအသေပိတ် အမူးလွန် ဟန်ဆောင် နေရပေမဲ့ ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာတော့ အသေအချာသိချင်သလိုပဲ။ နောက်တော့ တစ်ယောက် ယောက် အိပ်ယာ ပေါ်ကနေခုန် ထလိုက်တာ သိရှိခံစားမိသလို ရယ်သံ တွေလည်းကြားနေရတယ် သူတို့ဘာသာ ဘာ တွေ ပြောပြီးရယ်ပွဲ ဖွဲ့နေတယ် မသိ။ ခဏအကြာမှာတော့ သူရိန်ကျွန်တော့်ကိုတွဲထူပြီး အပေါ်ထပ်အခန်းထဲကိုလိုက် ပို့လေရဲ့။ ပြီးတော့ တံခါးတွေကို ပိတ်လိုက်သံကြားလိုက်ရတယ်။
ခြေသံတရှပ်ရှပ် ပြီးတော့ မီးဖွင့်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း နိုးနေပါပြီ။ မွေ့ ယာရဲ့လှုပ်ခါမှုကို သိလိုက်ရပြီးနောက် သူရိန်အသံကိုအနီးကပ်ကြားလိုက်ရတယ်။ 'ဇာနည် ထကွာ'။ ကျွန်တော့် ပခုံး ကို ငြင်ငြင်သာသာလှုပ်နိုးတယ်။ မလှုပ်ရှားပဲကျွန်တော်နေလိုက်တာပေါ့ သူဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ သိချင်တာ ကြောင့်။ နောက်တစ်ခါ သူကျွန်တော့်ကိုထပ်လှုပ်တယ်။
'Fuck, man, မင်းဘယ်တုန်းကမှ ဒီလိုမသောက်ပါဘူး'
သူ့ကိုအဲဒီလိုမလုပ်ပေးစေချင်တာတော့အမှန်။ဒါပေမဲ့ သူဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်ခြေထောက်က ရှူးဖိနပ်တွေကိုချွတ်တယ်၊ အိပ်ယာပေါ်မှာ ကန့်လန့်လှဲနေတာကြောင့် ခြေထောက် က တွဲလောင်းဆိုတော့ သူချွတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။
ရှူးဖိနပ်တွေချွတ်ပြီးတော့ သူကျွန်တော့်ရှပ်အင်္ကျီက ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးချင်းဖြုတ်လေရဲ့။ ကျွန်တော့်မသိစိတ်က ထထိုင်ပြီး သူ့ကိုအရူးလုပ်နေကြောင်း ထပြောချင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိစိတ်ကတော့ သူဘာဆက်လုပ်ဦးမလည်းဆို တာ စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်လေ။ ကြယ်သီးတွေ အားလုံးပြုတ်သွားပြီးနောက် ရှပ်အင်္ကျီကို ဖြည်းဖြည်းလှန်လိုက် တော့ ကျွန်တော့် ရင်အုပ်တွေ ဗိုက်ကြွက်သားတွေပေါ်ရပြီပေါ့။ အဲဒါကို သူဘာမှဆက်မလုပ်ဘဲ အတန်ကြာငြိမ်နေ သေးတယ်။ အသက်ရှူသံ......ဟုတ်တယ် သူ့အသက်ရှူသံတွေဟာ အပြေးသမားတစ်ယောက်လို ပြင်းထန်လာတာ ကိုဆက်ကြားနေရတယ်။
သူကျွန်တော့်ရှပ်အင်္ကျီထဲလက်လျှိုပြီးနောက် ကလိထိုးပါတော့တယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ဟာ အလွန့်ကို ယားယံတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူရိန်ကျွန်တော့်ကိုဒီလို ကလိထိုးပြီးစတဲ့အခါမှာပေါ့။ သူတစ်ခုခုစချင်နောက်ချင် တဲ့အခါတွေမှာ သူဒီလိုကလိထိုးတတ်တယ်။ အဲဒီအခါ အင်္ကျီတစ်ထည် ကောက်ဆွဲပြီး ၀တ်လိုက်ရင်ပြီးဆုံးသွား တတ် တာပါ။ အခု ကျွန်တော့်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုရချင်တော့ အခုသူအဲဒီလိုလုပ်ပြန်ပြီ။ ခါတိုင်းလိုခွက်ထိုးခွက်လှန် မရယ်မော ဖြစ်အောင်ထိန်းရင်း ဘာမှမသိသူလိုလှဲနေလိုက်တယ်။
သူရိန်လေ ခဏတော့ ဆက်ပြီးကလိထိုးသေးတယ်။နောက်တော့ ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ် အပိုင်းတွေကို ငြင်သာစွာထိတွေ့စပြုလာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘော်ဒီဟာ ကောင်း ကောင်း လေ့ကျင့်ထား တာကြောင့် အစိတ်အပိုင်းတိုင်း အချိုးကျကျစ်လစ်ပါတယ်။ သူရိန် ဒါကို အမြဲမနာလိုဖြစ်ပြီး ' muscle-stud, stud puppy' စသဖြင့်ခေါ်ခေါ်ပြီး စနောက်တတ်သေးတာပါ။
အခုသူဘာစိတ်တွေဖြစ်လာပြီမသိ ရင်အုပ်တွေ၊ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို အသာကိုင်တွယ်ပွတ်သပ် စပြုလာပြီ။ ကျွန်တော်ဆက်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတာကိုသိတော့ ပိုအတင့်ရဲလာကာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်က ရှပ်အင်္ကျီကိုဖယ်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်ပါတော့တယ်။ 'ဂလ'ု ကနဲတံတွေးမျိုချသံကို ကြားရသလို သက်ပြင်းချသံကိုလည်း ကြားရတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကလည်း တဖြည်းဖြည်းခေါင်းထောင်ထလာသလို သူ့လက်တွေက အောက်ပိုင်းဆီ ရွှေ့လာကာ ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ်ကနေ မာထောင်နေတဲ့အရာကို ကိုင်တွယ်လေရဲ့။
သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ဘယ်လီကြွက်သားတွေကို ကိုင်တွယ်နေရင်း ကျန်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ငပဲရှိရာကို ပွတ်သပ်နေတယ်။ မကြာပါဘူး ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီက ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်သံကို ကြားရချိန်မှာတော့ မျက်လုံးကို မှေးဖွင့်ပြီး ကြည့်လိုက်တယ်။ သူရိန်လေ သူ့တီရှပ်ကိုချွတ် သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့် ငပဲကိုကိုင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပွတ်သပ်ရင်း ကျွန်တော့်ညီဘွားကို ထိပ်ပုတ်လိုက်ရင်းသူ့ဟာသူ masturbate လုပ်နေ တာလေဗျ။
ဒီလိုဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး ကိုယ့်အရင်းအနှီးဆုံးဘော်ဒါက မာထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို စမ်းသပ်ရှာဖွေကိုင်တွယ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုလေ။ တဆတ်ဆတ်သွေးတိုးပြီး ထွားလာတဲ့ ပစ္စည်းကို ကိုင်ရင်း သူ့မျက်လုံး တွေက ကြယ်တွေအလား အရောင်တောက်လာတော့တာပေါ့။
'Shit! ငါ့စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့ဘူးကွာ၊ မင်းကိုဒီညငါအပိုင်ရပြီပေါ့'
ဖွင့်လက်စ ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့ဇစ်ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ကာ အသာဆွဲချွတ်ပါတော့တယ်။ အတွင်းမှာဝတ်တားတဲ့ boxer ဘောင်းဘီ ကိုလည်း သူနည်းနည်းလျှောပြီးဒစ်ပေါ်အောင်ဖော်တာလည်းပါသပေါ့။ သူ့ကို ဘာမှ မကူညီနိုင်ဘူး။ နောက် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းက ရှပ်အင်္ကျီတွေကိုလည်း အလိုက်သင့်ဖယ် ရှားတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် နိုးနေပြီဆိုတာ မသိစေချင်သေးဘူး။ သူလည်းသတိမမူမိဘူးထင်ရဲ့။ သူ့လက်တွေနဲ့ဆက်ပြီး စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်ရှာ ဖွေဆဲ။ သူ့ရဲ့အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းကိုလည်း ကြားနေရတယ် အခန်းကတိတ်ဆိတ်နေတော့။ သူတကယ့်ကို ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အာရုံစူးစိုက်တော့တာလေ။ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို အာရုံမထားသတိမမူတော့ ကျွန်တော်လည်း မျက်စိကိုတစ်ဝက်ဖွင့်ပြီး ကြည့်တာပေါ့။ သူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ သိဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ သူကရော သူကတော့ သူ့တီရှပ်ကိုချွတ်ပြီးတော့ သူ့ဘောင်းဘီတွေလည်း ခုတင်ဘေးမှာ ပုံထားတယ်၊ နောက် ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း တဖက်ကိုပြန်လှည့်ကာ masturbate ခဏလုပ်လိုက်သေး။ သူကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ၊ ဗိုက်ကြွက်သားတွေအပေါ်အတော် နှစ်သက်သလားမသိ ပွတ်သပ်လိုက် ခပ်ဖွဖွညှစ် လိုက်နဲ့။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မတွေနဲ့ အသာညှစ်ပေးတာမှာ အသံထွက် မညည်းရဲဘူး စိတ်ထဲ ကပဲ 'အာ....' ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဖီးလ်ယူမိတယ်။
'What the fuck'
သူ့ပါးစပ်က ရုတ်တရက်ညည်းတွားသံထွ့်လာတော့ ကျွန်တော်နိုးနေတာများ သိသွားပြီလားလို့ လန့်သွားရသေးတယ်။ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေ မာလာတာကိုကြည့်ပြီး ရေရွတ်နေတာကိုး။ သူဆွနေတာကြောင့် ကျွန်တော့်ညီဘွားမှာ ဘောင်းဘီထဲ တွန်းကန်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေရပြီ။
ရင်အုပ်ကအမွှေးနုလေးတွေကို သူပွတ်သပ်၊ ဗိုက်ကြွက်သားကအမြှောင်းလေးတွေကို ကလိ၊ ဆီးခုံကအမွှေးနုလေး တွေကို လက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့ထိုးမွှေရင်း ခါးမှာချန်ထားတဲ့ အဖြူရောင် cotton အတွင်းခံကို ထပ်မံလျှောချ လိုက်ရင်း ငပဲ ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ 'Shit yeah, dude' ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့်ပစ္စည်းက အတော်ထွားတာ။ ၆လက်မခွဲလောက်ရှည် တာ ပြီးတော့ တုတ်လည်းအတော်တုတ်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ မနာလိုဖြစ် ရလောက် အောင် ဂိုက်ဆိုက်မှီပါတယ်။ သူရိန့် ပစ္စည်းကလည်း လှတယ် ရှည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ထက်နည်းနည်းသေး ပါတယ်။
သူရိန် သူ့လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း ဘောင်းဘီကို ခြေချင်းဝတ်ကတစ်ဆင့် ဆွဲချွတ်ပစ်တယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ခိုင်ရှည်လျားတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို ကိုင် ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ပွတ်သပ်ကြည့်...အား....တွေကိုလည်း သူကလိ တယ်။ ပေါင်အတွင်းသားပိုင်းတွေကို ပွတ်သပ်လိုက် အသာညှစ်လိုက်လည်း လုပ်ပြန်တယ်။ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို နည်း နည်းကွာအောင်ချဲလိုက်ပြီး အတွင်းသားနုနုတွေကိုလည်း လက်ကစားပြန်သေး။ သူ လူတစ်ယောက်နိုးနေလား ဘာ လား အာရုံမစိုက်နိုင်လောက်အောင် မိန်းမောနေပြီ။ အရက်သောက်ထားတော့ သွေးဆူနေသလို ကာမစိတ်လည်း ကြွပြီထင်ပါ့။ သူ့လက်နှစ်ဖက်လုံး အလုပ်ရှုပ်နေတာများ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်ပြီး လက်ကစားနေသလို တွေကိုလည်း ကလိတယ်လေ။ ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်ရင်တော့ ထွက်တော့မှာပဲ။ ဒီအချိန်မှာ ဟုတ်တယ် ဒီအချိန်မှာထလိုက်ရင် ကောင်းမလားတွေးမိပါသေးတယ်။
'Shit, buddy, I can't help it I gotta have you'
ကွမ်းသီးခေါင်းလေး ရုတ်တရက် ပူနွေးနွေးကို ခံစားရတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း သူရိန် ကျွန်တော့်ငပဲကို ငုံထွေးစပြုပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ တမျိုးကြီးပဲ စိတ်ထဲ ရင်ထဲကြည်နူးသလိုလို ဟာတာတာလိုလို ခံစားရပါသေး တယ်။ အတံရဲ့ထိပ်ကလေးကိုလျှာနဲ့သပ်လိုက် အပေါက်လေးကို ကလိလိုက် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ငံထွေးလိုက်နဲ့လေ။ 'အို....ရှီး' ကျွန်တော့် balls တွေကို တစ်လုံးခြင်းငုံပြီး သွားနှင့် မနာအောင်ကိုက်ပြီး စုပ်မျိုသေးတာ။ သူရိန်ဒါတွေကို ဘယ် အချိန်ကစပြီး တတ်နေပါလိမ့်။ အိုး....ပန်းထုတ်ချင်ပြီ.....လထိပ်ရောက်နေပြီ.....သူရိန်စုပ်တာက ကောင်း လိုက်တာ။ လူကသာမလှုပ်ရှားမိတာ ညီဘွားထဲက ရွှေရည်တွေ ရေပြွတ်လို 'ပြွက်ကနဲ.....ပြွတ်ကနဲ'။ သူအား လုံးတစ်စက် မကျန် လျှာနဲ့လျက်ပြီး အားလုံးမျိုချပစ်လေရဲ့။ မျက်စိကိုမှေးပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့် ငပဲကိုဆက်ပြီးစုပ်မျိုရင်း သူ့ငပဲကိုထုသတ်နေတာ။ လက်တွေ ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှား၊ လှုပ်ရှားရင်း မတ်တပ် ထရပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ဗိုက် သားတွေ ရင်အုပ်တွေပေါ် သူ့လရည်တွေ ဖျန်းပက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် ဗိုက်သားတွေ ရင်အုပ်တွေပေါ်က ဟာ တွေကို လက်နဲ့သရပ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် တစ် ချက်နမ်းပါတော့တယ်။
'Oh ...ဇာနည် I Love you'
သူကျွန်တော့် ဘေးကိုဝင်ရောက်လှဲလျောင်းရင်း တစ်ကိုယ်လုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်တယ်။ ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်း ချင်း အသာထိတယ်လေ။ ဖွဖွ...တစ်ကယ့်ဖွဖွလေးနမ်းတယ်။ ဒီအချိန် သူ့ကို ပြန်နမ်းမိရင် စိတ်ဆိုးသွားမလားမသိ လိမ်ရ ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့လေ။ သူ့လက်မောင်းတွေက ကျွန်တော့်ကိုပွေ့ဖက်ထားသလို ပေါင်တွေကလည်း ကျွန်တော့် ကိုခွထားတာ သူ့ငပဲက ပြန်မတ်လာပါရဲ့။
Posted by Alex Aung at 6:39 PM No comments:
'You guys make the perfect couple'
Cynthia ရဲ့နှုတ်ဖျားက မထိန်းနိုင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ချီးကျူးစကားပါ။
ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲ ရီဟာဇယ်လုပ်အပြီး စားသောက်ဆိုင်ကို
ကားမောင်းလာစဉ်ခဏ သူမကမအောင့်နိုင်ဘဲ ပြောချင်းလေ။
တကယ်ကျေးဇူးတင်တာပါ သူမကို။ အပေါင်းအသင်းစိတ်ထားနိုင်တယ်၊
ဘော်ဒါအဖြစ်လက်ခံဆက်ဆံ နိုင်သေး တာကို ချီးကျူးပါတယ် လေ။ ဟုတ်တယ်ဗျ...
.ကျွန်တော်တို့ချစ်သူ နှစ်ယောက် အတွက် လျှောက်ခဲ့ရတဲ့
လမ်းကအလွန်ရှည်လျား ခဲ့တာ။ ဒီလောက်ရှည်ကြာ ခိုင်မြဲနိုင်ခဲ့တာ ကိုလည်း
ကျွန်တော်အခုထိ မယုံ နိုင်သေးပါဘူး။
ဖြောင့်ဖြူးနေတဲ့လမ်းမကြီးမှာ ကားတွေက ဦးဒဟိုသွားလာနေကြတာ
စမ်းချောင်းထဲရေတွေအဆက်မပြတ် စီးဆင်းနေသလို ပါပဲ။ ဒီကား ရေစီးကြောင်းထဲ
လိုက်ပါစီးမျောရင်း ဟိုးအရင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆုံမိကြတဲ့ အချိန်ကာလများစီ
ကားရဲ့ အမြန် နှုန်းနဲ့အတူပြန်လည်ရွေ့ လျားသွားမိရပါပြီ။ သူ့ရဲ့
ကိုယ်သင်းနံ့သည် အရင်လိုမွှေးပျံ့မြဲ၊ ရင်ခုန်သံသည် လတ်ဆတ် နွေး
ထွေးနေမြဲပါ။ အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ ဆုံမိကြတဲ့ညက
ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်သူဆိုတာသိ တယ် ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ
သိကြသလို တစ်ပြိုင်နက် တည်းမှာပဲ သူစိမ်းတရံစာတွေဖြစ်နေ ကြတယ်။
၁၈နှစ်အရွယ် မြန်မာပြည်က ရောက်လာတဲ့လူငယ်လေးပေါ့။
တက္ကသိုလ်အစဦးနှစ်များမှာ ကြိုးစားစီးမျော နေသူ တစ်ဦး။ ဖော်ရွေချစ်ဖို့
ကောင်းတဲ့ ခင်မင်စရာလူငယ်လေး ကျွန်တော်ပါတဲ့ ဒီကသူငယ်ချင်းများ
ကပြောကြတယ်။ သူတို့လူမျိုးတွေက အတော်တော့ဖော်ရွေ သားပါ။
နေမ၀င်အင်ပါယာနိုင်ငံက လူများလို ကိန်းခန်းမကြီးကြ။ ကျောင်းက စီနီယာ
သူငယ်ချင်း များရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့စုပေါင်းလှုပ်ရှား သွားလာကြတာ
ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါရဲ့ ဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာ။ အဲဒါတွေကို ဘာ
ကြောင့်ပြန်ပြောနေသလည်းထင်ကြ မယ်.....သူ ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူနှင့်
ဆုံတွေ့ကာ ရင်းနီးမည့်အဖြစ်တော့အတွက် အကြောင်းအရာတွေ ကလာတော့မည်လေ။
ကျွန်တော်တို့ အုပ်စု၊ စီနီယာသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ Ft.
Lauderdale ကိုနွေဦးရာသီ အားလပ် ရက်မှာ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းဆုံး
အရမ်းဆုံးပါတီတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့၊ ပြီးတော့ အတွေ့အကြုံ အားလုံးနီးပါး
ကျွန်တော်တို့ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ကားမောင်းပြီးသွားကြတဲ့ ခရီးဖြစ်တာနဲ့အညီ
ကားမောင်းရချိန်ကြာရှည် လှပါတယ်။ ကားမောင်း တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေက
တစ်ယောက်တစ်လှည့်မောင်းကြတာ ပေါ့လေ။ အနည်းဆုံး နေ့ဝက်လောက် ကားလမ်းပေါ်မှာ
အချိန်ဖြုန်းရပါတယ်။ နားလိုက်မောင်းလိုက် ဟိုသည်ကြည့် လိုက်နဲ့မို့
အချိန်လင့် သွားတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဈေးပေါတဲ့ မိုတယ်မှာ ဗိုက်ဆာမှု၊
ညောင်းညာမှု၊ လိုအပ်တာတွေ အနည်းအကျင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်။ အားလုံး အ၀တ်
အိတ်တွေကို အခန်းထဲစုထည့်၊ မျှတသုံး၊ bathing suits တွေကိုရောပေါ့။
မိုတယ်ရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းက ပင်လယ်ကမ်း ခြေတစ်ခုကို မေးတင်ထားတာဗျ။
ရောက်ရောက်ခြင်းကိုပဲ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါ ဘော်ကျွတ်တွေရော
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါ ခုနှစ်လွှာကပွဲတွေရှိရာ ကလပ်တွေ ဘက် သွားဖို့
အာရုံရောက်နေကြသည်လေ။ ကလပ်တိုင်း မှာ လှပတဲ့မိန်းမတွေ၊ Sexy girls တွေ ၊
ခပ်တောင့် တောင့် ငနဲတွေနဲ့ လူလှိုင်းလုံးကြီးဖြစ်နေကြပါတယ်။
ကျောင်းသားလူငယ်ကျွန်တော် တို့ အုပ်စု အတွက်က တော့ အထူးရှယ်
မြင်ကွင်းတွေပေါ့။ မြို့ကြီးမှာဆို ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ကဲခွင့်
မရခဲ့ကြဘူး မဟုတ် လား။ အမှန်ပြောရရင် တော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းသာ
အမျိုးသားခြင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်နေတာ၊ အဲဒါကို သူငယ်ချင်းတွေကို သိခွင့်
ပေးဖို့ အခွင့်မသာ သေးပါဘူး။ အခုတော့ pussy တွေကိုတက်မက် နေတဲ့
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ကြိုးစားသရုပ် ဆောင်နေရသည်ပေါ့
သူငယ်ချင်းတွေ ကိုယ့်နံဘေးမှာ ရှိနေချိန်များမှာ။
မိုတယ်ကိုလူတိုင်းပြန်လာကြပါတယ်။ ရေမိုးချိုး၊ အ၀တ်အစားလဲကြဖို့
အရမ်းလန်းပြီး ပြန်မထွက်ချင်လောက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်
ကလပ်တစ်ခုကိုရွေ့ကြဖို့လေ။ ဒီဂျေ ၊ ကချေသည် ကအစ စားပွဲထိုး
လူတိုင်းက ပထမဆုံးသွားဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကလပ်မဟုတ် ဘဲ
ခေါင်းကိုက်လို့ မလိုက်ချင်တော့ဘူး မိုတယ်မှာပဲနေခဲ့တော့မယ်လို့
ပြောဆိုအကြောင်းပြပြီး ချန်ရစ်ခဲ့လိုက်တော့တာ။ သူတို့တွေမရှိတော့တဲ့
အချိန်မှာ အပြတ်ရှိုင်းပြီး ကျွန်တော့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေ
'Phoenix' တဲ့ပြာပုံကြားမှ ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်လာတဲ့
ဒဏ္ဍာရီထဲကငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ အမည်ကို ပေးထားတဲ့ကလပ်။ ယောက်ျား အရွယ်စုံတွေ
လှိုင်းထနေတဲ့နေရာ။ ရှည်ရှည်တွေရော ပုပုတွေရော ဆံပင်ကာလာမျိုးစုံ
ဘော်ဒီမျိုးစုံ။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ဂေးတွေကို ဒီ
လောက်များများတစုတဝေးထဲမြင်ဖူး ချင်းပါ။ သူတို့တွေအားလုံး GQ
မဂ္ဂဇင်းထဲကငနဲ တွေလိုပဲ ကြည့်ရတာအလန်း။ ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်
ပြန်ငုံ့ကြည့်မိတော့ အတော့်ကိုသိမ်ငယ် အားငယ်သွားရပါတယ်။
သူတို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိမဲ့အသွင် ကျွန်တော့်ဆီ မှာမရှိဘူး လို့
ထင်မိရပေါ့။ ပိန်သွယ်သွယ် ဆယ်ကျော်သက်အသွင် မပျောက်သေးတဲ့
ကျွန်တော့်ကိုလေ။ ငနဲတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ တစ်ယောက်မှ ကျွန်တော့်ဆီ
ချဉ်းကပ်မလာကြပါဘူး။ လည် တိုင်ကြော့နဲ့လှနေတဲ့ ငန်းတွေအကြားရောက်နေတဲ့
စတင်ခံစားလာရတော့တာပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကြားဖူးနေကျရင်းနှီးနေတဲ့ အသံကို
'Eric? Is that you?'
ကော့တေးလ်ဖန်ခွက်လွတ်ကျမတတ်ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အစ်ကိုနဲ့ အရင်း
နှီးဆုံးသူငယ်ချင်း John ကိုဘွားကနဲရှေ့မှာမြင်လိုက်ရတာကြောင့်လေ။
အိမ်ကိုမကြာခဏလာ၊ ကျွန်တော့်အစ်ကိုနဲ့ တတွဲတွဲ ပေါင်းသင်း
နေတဲ့သူငယ်ချင်းပေါ့။ စိတ်ကိုငြိမ် အောင်လုပ် ပြီးတော့မှ သူ့လည်ပင်းကို
ကျွန်တော်လက်တွေနဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်ကာ 'Oh John it's so good to see you,'
လို့ကြောက်လန့်သွားတဲ့စိတ် ကိုမပေါ်အောင် ထိန်းလိုက်ရပါတယ်။
'မင်း ဘာလာလုပ်တာလည်းဒီနေရာကို? ဒီနေရာက ဘယ်လိုနေရာဆိုတာ သိရဲ့လား?'
စိတ်ထဲ နည်းနည်းသိမ်ငယ်သွားသလိုခံစားရပါတယ်။ ဘယ်လိုများပြန်ဖြေရမှာပါလိမ့်။
'ကောင်းပြီ၊ ဘယ်သူနဲ့လာတာလည်းဒီကို၊ ဒီကိုလာတာအန်တီတို့သိလား?'
သူဟာ အမြဲတမ်းကျွန်တော့်အပေါ် ကာကွယ်မှုပေးတတ်ပါတယ်။
ကျောင်းမှာကျွန်တော့်ထက် နှစ်တန်းကြီး ပါတယ်။ ကျောင်းကအတူတူ ပဲဆိုပါတော့
မေဂျာယူထားတာလည်းတူကြတယ်။ တောင့်ဖြောင့်တဲ့သူ့ ကိုကြည့်ပြီး
ကျောင်းမှာရော အိမ်မှာရော အတွေးဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊
ပြီးတော့သိလည်းသိချင်ခဲ့တယ် အခုထိ သူဘာကြောင့် girlfriend
ခင်မင်နှစ်လိုရွှင်မြူးဖွယ်ကောင်းတဲ့ သူနဲ့ ၊ ဆွဲဆောင်မှုဓာတ်အတော်များတဲ့
သူပါပဲ။ သူလည်း ဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်လို
ပဲဆိုတာသိသာနေပြီ။ ကြည့်စမ်း....အဲဒါကို ဘာကြောင့်အစက မတွေးမိတာလည်း။
ကျွန်တော့်လိုအကြောင်းပြချက်မျိုး နဲ့ရောက် နေတာပဲဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လား?
'John ဘာကြောင့် ကိုယ်ဒီနေရာရောက်နေလည်း ပြီးတော့ you လည်းဘာကြောင့်
ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆို တာ အသိသာကြီးပဲ, so let's just haveagood time.'
ကပွဲကြမ်းပြင်ကိုဆွဲခေါ်သွားလိုက်ပါသည်ပေါ့။ ပထမတော့ သူငြင်း ဆန်နေပေမဲ့
ခဏအကြာမှာ တော့ ဂီတ beat တွေနဲ့အတူ မျောပါသွားတာပါပဲ။ ငနဲတစ်ချို့က
ကျွန်တော် တို့တွဲကနေတဲ့ကြားမှာ ၀င်ကရင်း သူ့ကိုခွာထုတ်ချင်ကြ
သေးတယ်ထင်ပါ့။ ဒါပေမဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော့်ကြား
ကပွဲကြမ်းပြင်မှာကရင်း အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ နှစ်ဦးသားတဖြည်းဖြည်း
ပူးကပ်လာမိကြတော့တယ်။ သူ့ရဲ့အသက်ရှူ ငွေ့နွေးနွေး တွေကို
ကျွန်တော့်ဂုတ်တွေတစ်ဝိုက် ခံစားရရှိလာသလို တစ်ခါတစ်ခါ သူ့ တင်ပါးတွေက
ကျွန်တော့်ဆီ ဖိကပ် လာတာကြောင့် ကျွန်တော့် ညီဘွားခမျာ
ကျောက်တိုင်ကြီးဖြစ်ဖြစ် လာရတယ်။ သူ့လည်ပင်းကို ကျွန်တော်လက်တံတွေနဲ့
ဖက်တွယ်ကာ ဆွဲယူလိုက်ပါတယ် မျက်နှာ ချင်းပို ပြီးနီးကပ်ဖို့။ သူ့ cologne
အနံ့ရယ် ချွေးစက်လေး တွေနဲ့ရောနေတဲ့ သူ့ကိုယ်နံ့တွေက ကျွန်တော့်ခေါင်း
ကို တိမ်းမူးမှုနဲ့မူးယစ် ရီဝေစေတော့ တာပေါ့။
ဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားဖို့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း အစမှာတော့
ကျွန်တော့်အနမ်းကိုမလိုချင်သလိုလိုနဲ့ပေမဲ့ မကြာခင်မှာတော့ သူ့နှုတ်ခမ်း
တွေဟာ ပွင့်အာလာမှုနှင့်အတူ ကျွန်တော့်လျှာတစ်ခုလုံး
သူ့ပါးစပ်အတွင်းထိရောက်ဖို့ ငံ့လင့်လာပါတယ်။ အနမ်းတွေဟာ
တကယ့်ကိုညင်သာခဲ့တယ်။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေချင်း ထိခတ်ကြ တယ်၊ လျှာဖျားလေး
တွေရစ်ပတ်ကြတယ်ပေါ့။ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်
ဆွဲခွာမိကြချိန်မှာတော့ အသက်ရှူမှား ပြီး စကား တွေထစ်ကုန်ရပါတယ်။
မယုံနိုင်အောင်ပဲ ကျွန်တော့်အစ်ကို သူငယ်ချင်းနဲ့ အနမ်းတွေရဲ့ညှို့
'I'm sorry John, ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို
စကားသံနှင့်အတူ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ခါးကိုဆွဲဖက်ပြီး
သူ့ကိုယ်နှင့်ကပ်သွားစေကာ နှုတ်ခမ်းများ ဟာလည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း
တစ်စုံလုံးပြုတ်ပါသွားအောင် အနမ်းပြင်းပြင်းလေး ပေးစပ်ပါတော့တယ်။
ရင်ခုန်တိမ်းမူးဖွယ် အနမ်း... .ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လွင့်မျော
နေသလိုပါပဲ။ တက်မက်စွာနွေးထွေး စိုစွတ်စွာ။ သူ့အနမ်းကို
မရုန်းဖယ်ချင်တော့သလို သူ့တစ်ကိုယ်လုံးကပေးမဲ့ taste ကိုလိုချင်မိရပါပြီ။
အနမ်းပွဲကိုကြာရှည်စွာ ဆင်နွှဲအပြီးမှ သူဘယ်မှာတည်းခိုသလဲ မေးရတော့တယ်လေ။
'ငါ Hilton မှာ တစ်ခန်းယူထားတယ်။ မင်းကော?'
'အမ်း....အဲဒီဟိုတယ်လို အမိုက်စားတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီကလပ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့
Sunshine Motel မှာတစ်ခြားသူငယ်ချင်းလေးယောက် နဲ့အတူတည်းနေတာဗျ။'
'ကောင်းပြီလေ ဒါဆို Hilton ကအခန်းကိုသွားနားသင့်ပြီထင်တယ် ကိုယ်တို့တွေ'
သူဘာလိုချင်လို့ပါလဲ ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ် စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး အဲဒီ အ
ကြောင်းကို။ မမှီတမီ သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားဆီထိကပ်ဆွဲနမ်းလိုက်ကာ သူ့လက်
ဖျားကိုဆွဲကိုင်လျက် club ထဲကခေါ် ထုတ်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒီလို
ဘာကြောင့်လုပ်မိလည်း မမေးနဲ့နော် ...ရှက်တယ်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ အတွက်ခက်တယ် လို့ခံစားရသလိုပဲ။ ကလပ်ထဲမှာ
ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ခံရတာ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အနမ်းတွေဖလှယ်တာကို
ဂရုတစိုက် ကြည့်နေကြတာတွေကိုလည်း ဂရု မစိုက်ဘူး။ ဒီညဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ
နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့ညပေါ့ သူနှင့် ကျွန်တော် လေ။ ဘယ်တုန်းကမှ
မခံစားမိခဲ့ဖူးတဲ့ ခံစားမှု ရသ တစ်ခုပါပဲ။
လူတွေလည်း မျက်စိထဲမမြင်တော့ဘူး၊ ကားလမ်းကိုလည်း
သူ့လက်ကိုဆွဲဖြတ်ကူးလိုက်တာပဲ။ ဟော်တယ် ကြီးရဲ့ ခမ်းနားမှုကလည်း
ဆိုက်ရောက်ရောပေါ့။ အခန်းထဲရောက်တော့ သူအဦးဆုံး လုပ်တာကတော့
အောက်မှာနေရတဲ့ခံစားမှုဟာ အတော်လုံခြုံသလိုပါပဲ။ တစ်ကိုယ်လုံး ဖြေလျော့ကာ
သူ့ရင်အုပ်ကြွက်သား တွေက တစ်ဆင့်ရနေတဲ့ သူ့ကိုယ်နံ့သင်းသင်းကလည်း
တခြားသူရဲ့ ကိုယ်နံ့နှင့်မတူ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေသ လိုပဲ
ကျွန်တော့်အတွက်။ သူ့ကိုယ်ကိုဆွဲဖယ် ပစ်ဖို့ဘယ်တော့မှ လုပ်ချင်မှာ
မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့လက်ချောင်း တွေက ကျွန်တော့်ရှပ်အင်္ကျီအောက်ကို လျှိုဝင်ကာ
နောက်ပိုင်းသားတွေ၊ ပုခုံးသားတွေ ကိုကိုင်တွယ်ကာ
အင်္ကျီကိုချွတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် နောက်နည်းနည်းဆုတ်ကာ
သူအင်္ကျီချွတ်တာ လွယ်ကူ အောင် ကူညီရွေ့လျားပေးခြင်းလုပ်ရတာပေါ့လေ။
သူ့မျက်ဝန်း တွေ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်ဆီ အရောက်မှာ တော့ ကျွန်တော့်
မျက်လုံးတွေကို ပိတ်လိုက်မိပါတယ် သူ့စိတ်ကြိုက် သူ့လက်တွေနဲ့
ခန္ဓာကိုယ်အစိတ် အပိုင်းတွေကိုဖွေရှာပါစေတော့။ သူလက်ချောင်းကလေးတွေနဲ့
ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးကို တဖြည်း ဖြည်းဆွလိုက် ပွတ်ဆွဲလိုက်
ညှစ်လိုက်လုပ်တာ ရင်ထဲ တဒိန်းဒိန်းဖြစ်ကာ မာလာပါတော့တယ်။
ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်က လက်ချောင်းကလေးတွေ၊
နှုတ်ခမ်းသားတွေနှင့် တို့ခတ်ကစား တာဟာ အတော်တော့ ခြောက်ခြားစေတာအမှန်။
အခုသူ့လက်ဖ၀ါးနုနုညံ့ညံ့လေးတွေက ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်က တစ်ဆင့်တ ဖြည်းဖြည်း
၀မ်းဗိုက်ကြွက်သား များဆီ အစုန်အဆန်တို့ထိနေတာလေ။ သူ့လက်
တွေကျွန်တော့်ဘောင်းဘီခါးပတ်ဆီ အရောက်မှာတော့ ရင်ထဲထိတ်ကနဲဖြစ်သွားကာ
သူ့လက်အစုံကို ဖမ်းကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဆက်မလုပ်ဖို့တားမြစ်တာမဟုတ်
ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံဆက်လက်မလှုပ်ခတ်နိုင် တော့လောက် အောင် ပြင်းထန်သွားမှာ
စိုး၍ ခဏလောက်ထိန်းလိုက် သည့်သဘော။
ဖမ်းဆုပ်ထားသည့်လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်စဉ်ခဏမှာ ခါးပတ်တွေ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ
ကျွန်တော့် ခြေဖျားကတစ်ဆင့် ဆိုဖာပေါ်ရောက် ကုန်ပြီ။ သူ့လက်တွေ boxer
ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ငပဲကိုဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းများဟာ
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းပါးကို ၀ါးမျို စုပ်ယူလျက်။ အိုး...မိုင့်ဒါလင်....
ရင်ခုန်သံတွေ အရမ်းမြန်နေရပြီ။ ခါးကရှုံ့ကြိုးကိုလျှော့ကာ
အလိုက်သင့်လျောချလိုက်တော့ ကျွန်တော့် ငပဲဟာ
ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်ပါ တော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှုတ်ခမ်းဖျား နီတာရဲလေး၊
ဆံနွယ်ခွေတွေ၊ နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့၊ အထိအခတ် မဖြစ်စလောက်လေးတွေ ဟာ
စိတ်အလျင်နိုးထမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနေ ပါပြီ။ သူ့အနားတိုးကပ်လိုက်တော့
ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲဆီ လျှာဖျားလေးတွေနှင့်
ထိပ်ဖူးကိုရစ်ကာဝိုက်ကာဖြင့် ကလိ သည်ပေါ့။ အတန်ကြာကလိပြီးမှ
ထိပ်အရေပြားကိုသွားလေးဖြင့် မနာအောင်ကိုက်နေရင်း မျိုချလိုက်ပါ တော့တယ်။
ပူနွေးနေတဲ့ အာ ငွေ့ ပြီးတော့ အာခေါင်ထိအောင် အသွင်းအထုတ်ပြု
လုပ်ပေးတာကြောင့် ကျွန်တော် မထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလို တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်
ဆတ်ခါသွားရကာ ပန်းထည့်လိုက်ပါ တယ် 'အား...အ...အ...John....'
အားနာသမှုဖြင့် ပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် သူက လွှတ်မပေးဘဲ စုပ်မျိုထားကာ
တစ်ယောက်တည်း masturbate လုပ်တာနဲ့မတူ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေ
လျှာတွေ ပါးစပ်အတွင်း ကျွန်တော့် ညီဘွားရောက်ရှိခဲ့ ရသော ခဏတာမှာ။ အချိန်
အကြာကြီး suck ခွင့်သူမရရှိခဲ့ဘူး ထင်ရဲ့ ပြီးခါနီးအချိန်မှာ
သူ့ပါးစပ်ထဲကဆွဲထုတ် ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် အပြင်မှာ ပန်းထုတ်မယ်ပေါ့။
သူ့လည်ချောင်းထဲ ပန်းထုတ်မိမှာ စိုးရိမ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမဲ့ သူအရမ်းကို
ကျွန်တော့်အလှည့်ပြီးပြီဆိုတော့ သူ့အလှည့်ပေးရမှာပေါ့။ ခပ်ကားကားနဲ့
စွင့်နေတဲ့ရင်အုပ်ပေါ်က ကြယ် သီးလေးတွေကို တစ်လုံးခြင်း ဖြုတ်ရင်ဘတ်ကို
လက်နှင့်အသာပွတ်သပ်ကြည့်မိတော့ မွှေးညှင်းနုလေး တွေက ကတ္တီပါစလို
...တဖြည်းဖြည်းနှင့်အောက်ကိုစမ်းသပ်ကိုင် တွယ်ကြည့်မိတော့ လည်း
မွှေးညှင်းနုလေးတွေဟာ ဆီးစပ်အထိတန်းလို့။ ခါးပတ်ခေါင်းလေး တွေကို အသာဖြုတ်
အတွင်းကိုလက်လျှိုလိုက်တော့ အား.....သူ့ငပဲဟာ ကျောက်သားအလား
ဂျင်းဘောင်းဘီကိုအသာလျှော့ချလိုက်တော့ သူဝတ်ထားတဲ့ boxer ကအရှေ့နားမှာ
ထိုးထိုးထောင်ထောင်၊ ကွမ်းသီး ခေါင်းထိတဲ့နေရာမှာ
ရေစိုကွက်လေးတစ်ခုကရှိနေရဲ့။ ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း ဒူးထောက်ထိုင်ချ
လိုက်ကာ အဲဒီရေစို ကွက်လေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ဘောင်းဘီ ပေါ်ကနေ မထိရဲ
ထိရဲတို့ထိလိုက် လျှာနဲ့ရစ် ပတ်ကြည့်လိုက်လုပ်မိတော့တယ်။
ကွမ်းသီးခေါင်းကိုအပေါ်ကနေပဲ သွားနဲ့မနာအောင်ကိုက်လိုက် လျှာ
ဖျားနဲ့ကလိလိုက်လုပ်ရတာ အားမရတော့တာကြောင့် သူ့ဘောင်းဘီကို
ဆွဲချွတ်လိုက်တာ 'ဘတ်' ကနဲ သူ့ငပဲက အပေါ်ကို ထောင်တာများ
လန့်တောင်သွားတယ်။ 'wow! လှလိုက်တာ' ကျွန်တော့်အတွက် right size
ပါပဲ။ပြီးတော့ သူ့အရသာကလည်း ဂွတ် တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကို
ငုံပြီးရေခဲချောင်းကိုစုပ်မျိုသလို တဖြည်းဖြည်း အာခေါင်ထဲအသွင်း
အထုတ်လုပ်လိုက် လည်မျိုထဲထိမရောက် တရောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစား
အဲဒီည....ညက သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက စိတ်ဆန္ဒအတွက်ဆေးဝါးတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်ဝါးမျိုစား သုံးခဲ့တာ အရူး အမူး။ ကျွန်တော် သိသမျှ တတ်သမျှ
သူနည်းပေးလမ်းပြလုပ်ပေးခဲ့တဲ့နည်းတွေရော သုံးပြီး စားသောက်ခဲ့တာ။
သူကြိုက် မယ်ထင်တဲ့နည်းတွေ စဉ်းစားမိသ လောက်ပြုစုမိတယ်
သူပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ် စေချင်သည်လေ။ 'ရှီး..Eric..အ...အ' သူ့ခန္ဓာကိုယ်က
တုန်ယင်လာသလို သူ့ငပဲအရင်းက သွေး ကြော တွေကလည်း တဆတ်ဆတ်ခုန်လာတာကြောင့်
သူမကြာခင် ပန်းထုတ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ရိပ် မိရပါတယ်။ သူ့ moan
သံတွေဟာ ပိုမိုကျယ်လောင်လာပေမဲ့ ကျွန်တော့် ပညာကိုမလျှော့သေးဘူး ဆက်
ခဏအကြာမှာတော့ ပါးစပ်ထဲ တဆစ်ဆစ်ပန်းထုတ်လိုက်တဲ့ သူ့ရွှေရည်တွေက
ငန်ကျိကျိအရသာပေး ပါတော့တယ်။ ဘာရမလည်း ထိပ်ပေါက်ဝလေးကို
လျှာနဲ့ထပ်ကလိလိုက်တော့ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ဒိုးဒိုး ဒန့်ဒန့်။
ချွေးတွေစိုနေတဲ့ သူ့ခန္ဓာ၊ ပြီးတော့ အသက်ရှူ သံပြင်းပြင်းနဲ့
အိပ်ယာပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပါတော့ တယ်။ ကျွန်တော်လည်းထရပ်လိုက်ကာ သူ့နံဘေး
ကိုအသာဝင်အိပ်လိုက်တာပေါ့။ အိပ်ယာပေါ်မှာ ဘာ လုပ်မလည်းတွေးကြည့်ပါဦး။ သူက
ကျွန်တော့်ကို သူ့လက်မောင်းကြီး တွေနဲ့ ရစ်ပတ်ကာ ရင်ခွင်ထဲထွေး ဖက်ထား
တာဗျ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်အမြဲလိုအပ်နေတဲ့ နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်ဆိုတာ
'မင်းသူငယ်ချင်းတွေက မင်းဘယ်မှာရှိနေမလဲဆိုတာ စိုးရိမ်နေကြမယ်နဲ့တူတယ်'
သူတို့သတိမူမိရဲ့လားတောင်မသိဘူးဗျ။ သိလည်း ကျွန်တော
ကျွန်တော့်ဘက်ကိုကျောပေး ခြေတစ် ဖက်ကို သူ့အားခွစေကာ အိပ်စက်ပါတယ်သူလေ။
နှစ်ဦးသား နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားတဲ့ညဆိုတာ သံသယရှိ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်က ကျွန်တော့်လက်မောင်းအစုံနဲ့ချစ်တဲ့သူ
'Hey, you, we're here,' Cynthia ရဲ့ကိုင်လှုပ်မှုကြောင့်
'ဘယ်လိုလည်း ရီဟာဇယ်လုပ်ကြပြီးမှ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်သွားပြီလား၊
'ဟား....ဟား Cynthia ကိုယ့်ကိုနောက်နေတာလား?'
'ကိုယ်ချစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာလေ၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ် John?'
ဘေးနားက ပင်လယ်ရှုခင်းကိုငေးကြည့်နေရင်း ကျွန်တော်ပြောသမျှဟုတ်တယ်ဆိုပြီး
John ကခေါင်းငြိမ့် သတဲ့။ Cynthia နဲ့ သူမ သူငယ်ချင်းတွေက
ကျေးဇူးပါပဲ Cynthia ။ မင်းကိုယ်နဲ့လက်မထပ်ရပေမဲ့
တစ်ခြားအမျိုးသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်ထက်သာတာတွေ့ဦး မှာပါ။
မာမီတို့ကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပါ။ Thanks a
Wrote by – Alex Aung (9 Jan 2010)
Posted by Alex Aung at 8:39 PM No comments:
Take care about your sexual
မွေးကင်းစအရွယ်တွေ Sex ကိစ္စကိုနားမလည်ဘူးလို့ အများအားဖြင့် ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆေးပညာ အရပြောရရင် (၂)နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ မိခင်အ၀တ်လဲတာကို မသိစိတ်ကနေ စိတ်ဝင်စားနေတတ် ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားမှု ပြယုဂ်ပါပဲ။
သားတွေက ဖခင်ထက် မိခင်ကိုပိုချစ်တာ ၊ သမီးတွေက မိခင်ထက် ဖခင်ကို ပိုချစ်တာတွေဟာ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ် ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့ လိင်ကွဲနှစ်မြို့မှုကို အခြေခံတာပါ။ အဲဒီစိတ်တွေက မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရဲ့အစမှာ နိုးကြား လာတယ်။ စူးစမ်းချင်တယ်၊ လက်တည့်စမ်းချင်လာကြတယ်။ အမှန်က Sex ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်း မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင်၊ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်တွေကို ပညာပေးချင်တာပါ။ Sex အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားထားတဲ့ စာပေ တွေ လေ့လာဖတ်ရှုပြီး ပညာပေးတာကို ပညာပေးတယ်လို့မယူဆပဲ နည်းပေးလမ်းပြလုပ်နေတယ်လို့ယူဆပြီး တလွဲ တွေးမှာစိုးရွံ့မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် 'ပေးကားပေး၏ မရ' ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် ဒီဆောင်းပါးတွေကို ပညာပေး အနေနဲ့သာ ဖတ်ရှုစေချင်တာ ကျွန်တော့်စေတနာပါ။ ဒီလမှာလည်း Sex ကိစ္စသတိရှိပါဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က လူမင်းပြောတဲ့ လိင်ပညာပေးကို ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
Sex ကိစ္စဆိုတာ အပြစ်ကြီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး စက်ဆုတ်ရွံ့ရှာဖွယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါသဘာဝတစ်ခုပါ။ သဘာဝထဲက အရွယ်ရောက်တဲ့ ကျားမတိုင်း ကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စပါ။ ဒီအပေါ်မှာပြောချင်တာက သတိလေးတစ်ချက် ရှိဖို့ပါပဲ။ သတိရှိဖို့အတွက် စိတ်ကအဓိကပါ။ လူကိုစိတ်ကဦးဆောင်နေတာ။ ဘာသာရေးအရကြည့်ရင် လူရဲ့စိတ်ဆို တာ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာ မွေ့လျော်တာ သဘာဝပဲ။ မကောင်းတာကို မကောင်းဘူးမြင်ဖို့၊ အန္တရာယ်မှန်းမြင်ဖို့၊ စိတ်အ လိုကို အဆုံးစွန်ထိမလိုက်ဖို့အတွက် သတိလေးကပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားကြလို့သာ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်လာတာပါ။ Peopleစာအုပ်ထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပြောခဲ့တာ ဖတ်ရ တယ်။ အားလုံးထဲမှာ လူမှုရေးStress က အရှုပ်ထွေးဆုံးလို့ထင်တယ် တဲ့။ အဲဒါကိုထောက်ခံတယ်။ ဘယ်နယ် ပယ်မှာ ပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်တဲ့ ကျားမတိုင်းမှာ သူတို့နောက်ကွယ်က အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေခြင်း၊ သာယာခြင်း တွေဟာ တိုက်ရိုက် အချိုးကျနေတာ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အဲဒီလောက် ထိ...။
Media တွေရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းကနေ ပညာပေးနေပြီ
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြားထဲမတိုးဝံ့တဲ့ ရှက်စရာစကားတွေဟာ ဒီကနေ့ Media တွေရဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်း ကနေ ပြောဆိုလို့ရတဲ့ အနေအထားရောက်လာပြီ အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ Control လုပ်ဖို့လို အပ်လာလို့ လူတွေရဲ့စိတ်အလိုလိုက်မှုများလို့ ကွယ်ရာမှာ နှစ်ကိုယ်ကြားပြောရမယ့်စကားတွေကို လူပုံ အလယ်မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပညာပေးလာကြတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဘယ်အရာမဆို ကမ္ဘာကြီးကို လူသားတွေစား သုံးတာ၊ သုံးစွဲတာ တအားများလာတယ်။ လိင်ကိစ္စမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်း အရမ်းတိုးတက်ခေတ်မီလာ တယ်။ လူတွေကလည်း မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် သတိမကပ်နိုင်တော့ဘဲ စိတ်နောက်တောက်လျောက်လိုက်သွားပြီး အားလုံးက လိုတာထက်ပိုလာကြတယ်။ ခုဆို AIDSဆိုတာ ကပ်ရောဂါအသွင်ဖြစ်လာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကလည်း ဖောက်ပြန်လာပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်တုန်း စိုက်ပျိုးရေးမှာသင်ရတာက Biologicalပေါ့။ ဥပမာ စိုက်ခင်း တစ်ခင်းပေါ်ပိုးကောင်တွေသိပ်ကျလာရင် အဲဒီပိုးကောင်တွေကိုစားမယ့် နောက်ထပ်အကောင်တစ်မျိုးမွေးပေးရတယ်။ သဘာဝတရားကြီးမှာလည်း အဲဒါမျိုးတွေပေါ်လာတယ်။ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ စိတ်နောက် သတိလေးသာကပ်၊ ဘာမှမ ဖြစ်ဘူး။ အာမခံတယ်။ ဖြစ်လာရင်လည်း နောင်တမရပါနဲ့။ ဆက်မဖြစ်အောင်ဆင်ခြင်သင့်တယ်။ ကျွန်တော်ကြား သိနေရတဲ့ သတင်းတွေက မကောင်းဘူး။ မထူးဇာတ်ခင်းနေကြတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးအတွက် အရမ်း အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ကိုယ်က ဒီအကျိုးကိုခံစားနေရမှတော့ နောက်လူတွေထပ်ကူးစက်အောင် ဘာလို့လုပ်နေဦးမှာလဲ။ ဒီလုပ်ရပ်တွေက နောက်ဘ၀တွေထိ အကျိုးပေးပြီး ဆိုးသထက်ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့။
ကျွန်တော်ရဲ့ Sex Control
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့စကားဟာ အတင်းအဖျင်းထိုင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ စာဖတ်သူအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် ပြောသင့်ပြောရမှာပဲ။ လူလွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝတရားကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။ စိတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်း မတောင်းဆိုနဲ့ပြောလို့မရဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သတိတစ်ခုကပ်ဖို့။ ကျွန်တော်ခုအချိန်မှာ ဘာကိုတွေးနိုင်သွားပြီလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ သမီးရှိတယ်၊ဇနီးရှိတယ်၊ ဇနီးမှလည်း နောက်ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်အိမ်က မသိအောင်ပျော်ပါးလို့ရတယ်။ ကျွန်တော့်မိသားစုနဲ့ဘာကိုမှမလဲနိုင်ဘူး။ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်ချင်မိပြီဆိုရင်တောင်မှပဲ အသက်အရွယ်ရလာလို့လားတော့မသိဘူး။ အဲဒီသတိလေးကပ်သွားနိုင်ပြီ။ မိနစ်ပိုင်းလေးပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့သာယာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘ၀ကို မလဲနိုင်ဘူး။ အဲဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့ ကျွန်တော် Control လုပ်သွားတာပါပဲ။
Sex နဲ့ကပတ်သက်တဲ့ Stressဟာ လူပျိုဖြစ်စတွေမှာ တော်တော်များပါလိမ့်မယ်။ လူပျိုလူလွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စကို တနည်းနည်းနဲ့ဖြေရှင်းမိမှာပဲ။ အဲဒီ Stressကသိပ်များလာလို့ လုံးဝမနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ပြင်ပအမျိုးသမီးနဲ့ ပျော်ပါးမယ်ပဲထားပါတော့ သတိလေးကပ်လိုက်ပြီး တနည်းနည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်လိုက်ရင် ဒီ Stressကပြေ ပျောက်သွားမှာပါပဲ။ အသက်အရွယ်တွေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ပညာတတ်နဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေဟာ ဒီရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ ဆင်းရဲသူတွေက Sexနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတနည်းတယ်။ သိရင်တောင် ဆင်ခြင် နိုင်မှုနည်းတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရာရာသိတတ်နားလည်နေသူတွေကလည်း ဒီလောကထဲ မှာ ကျင်လည်နေကြတာပါပဲ။ သတိတစ်ချက်လွတ်ရင် ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးရလာမယ့်ဆိုးကျိုးက အတူတူပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဒီကိစ္စမပွင့်လင်းကြဘူး။ အဓိကနားလည်မှုပါပဲ။ အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးရော တစ် ဘက်လူရဲ့စိတ်အခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုတယ်။ ဒါကိုမေ့ထားဖို့မလိုဘူး။ များသောအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုဟာ သက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ အဲဒီကိစ္စကိုနှစ်ဖက်လုံးပေါ့လာကြတယ်။ ဘာလို့ပေါ့လာလဲဆို တော့ နှစ်ဖက်စလုံးက သားသမီးကိစ္စတွေ၊ မိသားစုတာဝန်တွေအတွက် ဘ၀မှာရုန်းကန်နေရတော့ သတိမထားမိကြ ဘူး။ တကယ်တော့နှစ်ယောက်လုံးက ဒီကိစ္စတွေမှာ ငုံ့လျှိုးနေကြတာ။ မီးဝေးချိတ်လို သိပ်ဝေးလွန်းရင်လည်း ဝေးကွာ သွားတတ်တယ်။ မအားမလပ်တဲ့ကြားထဲက တကူးတကနဲ့ အချိန်လေးယူပြီး မွေးနေ့လို၊ နှစ်ပတ်လည်နေ့လိုမျိုးမှာ သီးသန့်နွေးထွေးမှုတွေရယူဖို့လိုတယ်။
အခွင့်အရေးကလည်းရနေတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေးလည်းမထိခိုက်စေချင်ဘူးဆိုရင်တောင် ဒီအခွင့်အရေးရဲ့နောက် ကွယ်မှာ ဘာတွေကပ်ပါလာမလဲ။ ထားပါတော့။ အခွင့်အရေးရပြီး နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေ လည်းမရှိနိုင်ဘူးဆို ရင်တောင် ဘယ်သူမှမသိရင်တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ အဲဒီလိုကျူးလွန်ပြီးရင်တောင် သူရှေ့မှာ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံပါ့မလား။
ယောက်ျားတိုင်းစောင့်ထိန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ ရှုပ်ထွေးလာတာ တွေကိုတော့ ဖြေရှင်းရတာမတူဘူးပေါ့ဗျာ။ နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ ကျော်ကြားမှုကိုလိုချင်လို့ ရင်းနှီးတာတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ဘာသာတရားအရ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ လွဲမှားတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားထက်တော့ မကာမိပါဘူး။
လိင်ဆက်ဆံမှုကို စက်ဆုတ်ရွံရှာ စရာလိုမမြင်ပါဘူး။ Limitation လေးတစ်ခုထားပါ။ တတ်မက်မှုအာသာဆန္ဒဆိုတာ ဆုံးတယ်မရှိဘူး။ အချိုစားပြီးရင် ဒီ့ထက်ပိုချိုတာစားချင်တယ်။ အချိုပြီးရင်အချဉ်။ လိုက်လေလိုက်လေမဆုံးနိုင်လေ ဖြစ်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာ။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာမှာ ရာခိုင်နှုန်းတွေအများကြီးတိုးပွားလာတဲ့ ယောက်ျားစင်စစ်ကနေ ဟိုမိုပြောင်းလဲမှုတွေအထိဖြစ်ကုန်တာဟာ လူတိုင်းသတိထားမိလာတဲ့ကိစ္စတွေအထိ ဖြစ်လာ တယ်။ အိုဘားမားတောင် ဒီကိစ္စကို ခေါင်းခဲပြီးဖြေရှင်းရမယ့်အပိုင်းရောက်လာတာကိုး။ စစ်တပ်ထဲမှာ ဂေးတွေကို အမှု ထမ်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့။ ဗလတောင့်တောင့်ယောက်ျားတွေအများကြီး ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာ ခုနပြောသွားတဲ့ အာသာ ဆန္ဒနောက်ကို တန်းတန်းဆွဲလိုက်ရင်း၊ မဆုံးနိုင်တဲ့ ခံစားမှုနောက်လိုက်ရင်း ဒီလိုဖြစ်သွားကြတာပါ။ ဒါကို သတိလေး ကပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူတိုင်းက နိစ္စဒူဝ ဒီထက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ အများကြီးလုပ်နေကြရတာ။ အဲဒါကို Limitationမထားရင် လိုက်လေမဆုံးလေ၊ လိုက်လေ မဆုံးလေနဲ့ လွဲမှားတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်လာတာပါပဲ။ အဆုံးထိမ လိုက်ဘဲ ပြည့်ဝတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုရလို့ ရပ်ထားလိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲ။
လိင်တူအချင်းချင်း ဆက်ဆံမှုပညာပေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဥပမာ ဘရာဇီးလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဒီနည်းနဲ့ငွေရှာနေကြတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကြောင့်ပဲ။ ဒီကလေး တွေဟာ စိတ်ဆန္ဒကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုလုပ်နေရတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကို ငွေကြေးနဲ့အသုံးချနေတယ်။ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွေးအခေါ်မရင့်ကျက်သေးလို့ လွဲမှားသွားကြတာ တကယ်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ချက် Limitကိုမထိန်းနိုင်လို့ကျော်သွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
အခုလို Interviewတွေပြောနေပြီဆိုကတည်းက စာဖတ်မိတဲ့ပရိတ်သတ်တွေ ဗဟုသုတရဖို့ ဆွေးနွေးနေကြတာပဲလေ။ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်က အင်တာဗျုးလာလုပ်လို့ဖြေရတာထက် ဒီလိုပညာပေးမျိုးပြောရတာ ပိုလေးနက်ပါတယ်။ Celebrity ဖြစ်ပြီးတော့ အသက်အရွယ်လည်းရ၊ အနုပညာသက်တမ်းလေးလည်းရလာတဲ့အထဲက စဉ်းစားမိတာက လူတစ် ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို လူတစ်ယောက်ကကောင်းအောင် ဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင် မလဲတွေးမိတဲ့အခါ ဒါမျိုးပညာပေးတွေပြောချင်ပါတယ်။ PSIတို့ဘာတို့ဆိုရင် ဂရုတစိုက်နဲ့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ ယဉ်ကျေးမှုရယ်၊ ဘာသာတရားရယ်ကြောင့် ပညာပေးမှုတွေ အားနည်းနေတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ အသက်အပိုင်းအခြားအလိုက် အရွယ်ရောက်တဲ့ကလေးတိုင်းကို အားကစားနဲ့ လိင်ပညာပေးတွေလုပ်ပေးသင့်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်သားတွေဟာ အနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ယှဉ်ရင် လူကလည်းမထွားကျိုင်းဘူး။မျိုးရိုးကြောင့်လည်းပါတာပေါ့။ ကာယပညာကို မဖြစ်မနေ ကျောင်းတွေမှာလုပ်ရမယ်ဆို တာမျိုးဖြစ်စေချင်တာ။ အခုလိုဆွေးနွေးပွဲမျိုး ကျောင်းတွေမှာလုပ်ပေးနိုင်လေ ပိုကောင်းလေပဲ။
Celebrity Sex ကိုလူတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်
Celebriy တွေရဲ့ Sex Affairကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားတာ သိပ်တော့ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းသမီးဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက်ယောက်ျားတွေအပေါ်မှာဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ၀တ်မယ်၊စားမယ်၊သရုပ်ဆောင်မယ်။ မင်းသမီးဖြစ်ပြီ ဆိုကတည်းက ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိလို့ မင်းသမီးဖြစ်တာ။ မင်းသားတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဆွဲဆောင်ပြီဆိုကတည်းက Sex ကိုနိုးကြားအောင်ဆိုတာပါလာပြီပေါ့။ ဆိုပါစို့ တောသားလေးတစ်ယောက်ကလည်း အခု Hollywoodမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသမီး မီဂန်ဖောက်(စ်)နဲ့ တစ်ညလောက်တွေ့ချင်ရင် တွေ့ချင်မှာပဲ။ အဲဒီလို ပဲ မြန်မာပြည်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ကလည်း ဒီနေ့ကမ္ဘာကျော် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့အနမ်းတော့ တစ်ကြိမ် လောက်ခံယူချင်မှာပဲလေ။ ဒါဟာစိတ်ရဲ့ဆွဲဆောင်ရာပါပဲ။ ဒီလိုသဘာဝတွေရှိတော့ Celebrityတွေကိုပိုစိတ်ဝင်စား တာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ Styleကျအောင် ၀တ်စားပြီးသရုပ်ဆောင်တာက ကျွန်တော်တို့အလုပ်၊ အဲဒီအပေါ်မှာ စွဲလန်းတက်မက် ခြင်းက ပရိတ်သတ်အလုပ် ဆိုတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီလိုသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ နေရာမှာ Celebrity ဘက်ကလမ်းမှား ရောက်အောင် ဆွဲဆောင်နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
အခုလိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာ Mediaအပိုင်းက ရေးသားဖော်ပြမှုနဲ့ပညာပေးမှုကလည်း အရေးကြီးတယ်။ တချို့ကပွဲဆူ အောင် ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမယ့် ခေါင်းစဉ်အကြီးကြီးတတ်ချလိုက်တာမျိုးပေါ့။ ဆွေးနွေးတဲ့သူနှစ်ဦးစလုံးဟာ ပညာ ပေးလိုတဲ့စေတနာ၊ ကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကသွားနေကြတယ်။ လိင်ပညာပေးဆွေးနွေးနေတဲ့ Celebrity နဲ့ Media နှစ်ဦး လုံးပေါ်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တာဝန်ရှိပါတယ်။ ထပ်ပြောလိုက်ချင်တယ်။
Sex ကိစ္စ သတိရှိဖို့......။
Ref: www.people.com.mm (Issue 8.5, December 2009)